အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၁၁ – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၁၁
မေလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
အစုတ်ထုပ်အဆက်။ ၀ါသနာပါသူများ ဂလုနိုင်ကြစေရန် အလို့ငှာ 😛
အမေက အဖေ့ကို လူပျိုကြီးနဲ့ ပေးစားပြီး ရန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်းကို ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။
ပေးလည်း ပေးစားချင်စရာပဲဗျ။ လူပျိုကြီးက နည်းနည်း နွဲ့တယ်။ စကားပြောရင်လည်း အိညှက်အိညှက်နဲ့။ ၀တ်တာ စားတာလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်။ အဖေကလည်း အဲဒီ့လူကြီးကို အတော်ခင်ပုံရတယ်။ အဲဒီ့လူကြီးက သူ့အစ်မတွေနဲ့ နေတာပါ။ ဖေဖေ့ထက် ၄-၅-၁၀ နှစ်လောက်တော့ ငယ်မယ် ထင်ပါတယ်။
သူတို့အိမ်လည်း မကြာခဏ ရောက်ဖူးပါတယ်။ လူပျိုကြီးရဲ့ ယောက်ဖက ရှေးဇာတ်မင်းသားကြီးလို ဆံပင်ကို နောက်လှန်ဖြီးထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။ လူပျိုကြီးရဲ့ အစ်မကတော့ ခပ်ချောချောပေါ့။ သူတို့မှာ တစ်ဦးတည်းသော သမီးတစ်ယောက်လည်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ထက်တော့ ဆယ်နှစ်မက ကြီးမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ့အစ်မကြီးကလည်း ဖြူဖြူချောချောပါ။
သူတို့က စမ်းချောင်းဘက်မယ် နေကြတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲလားတော့ မသိဘူး၊ စမ်းချောင်း မကြီးကြီးလမ်းက ဒိန်ချဉ်ကို စွဲစွဲမက်မက် သွားသောက်ခဲ့ရတာကိုလည်း မှတ်မိလို့ နေပါတယ်။ မကြီးကြီးလမ်းလို့သာ ပြောတာပါ။ တကယ်တော့ ပြည်လမ်းနဲ့ ကျွန်းတောလမ်းကြား (ကျွန်တော် သဘောကျခဲ့ဖူးတဲ့၊ မမေ့နိုင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းရှင်) နေထိုင်ရာ မကြီးကြီးလမ်း မဟုတ်ဘဲ ကျွန်းတောလမ်းနဲ့ ရှမ်းလမ်း (အခု ဗဟိုလမ်းခေါ်သလား မသိဘူး) ကြားက ဒိန်ချဉ်ဆိုင်ပါ။
ဒိန်ချဉ်ကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒိန်ချဉ်ပြင်ဆင်ရောင်းချပေးတဲ့ အဘိုးကြီးရော၊ သူ့သမီး နှစ်ယောက် (ထင်တယ်)ပါ အတော် မျက်နှာထား ဆိုးပါတယ်။ သူတို့ ဒိန်ချဉ် အလကား တိုက်နေရတာ ကျနေတာပဲ။ အဲဒီ့မျက်ခွက်မျိုးတွေနဲ့ဆို ပိုက်ဆံ မယူသင့်ဘူး ထင်တာပဲလေ။
ဆိုင်ကလေးက စုတ်စုတ်လေးပါ။ တစ်ခါတလေ ဆိုင်ထဲမှာ ထိုင်စရာ နေရာ မရလို့ ကားပေါ်တင် သောက်တဲ့အခါ သောက်ရပါတယ်။ ဆိုင်က စုတ်ပေမယ့် သူတို့ လုပ်တာ ကိုင်တာ အတော် သန့်ပါတယ်။ (ဗမာစံနဲ့ သန့်တယ်လို့ ပြောတာနော်… နိုင်ငံတကာ စံနဲ့တော့ ဟုတ်လောက်ဘူးဗျ။)
နောက်တစ်ခုက ညဘက် သွားသွားစားရတဲ့ ကုန်ဈေးတန်း ရေခဲမုန့်။ အဲဒါလည်း အဲဒီ့ခေတ်က အဆန်းပဲ။ ကားသွားရပ်လိုက်ရင် ဘာရေခဲမုန့် စားမလဲလို့ လာမေးတဲ့ လူငယ်လေးတွေ ရှိတယ်။ စားချင်တာ မှာလိုက်တယ်။ သူတို့က အပေါ်ထပ် (ဘယ်နှထပ်လဲတော့ မသိဘူး)က အခန်းကို သွားမှာတယ်။ ပြီးတော့ ယူလာပေးတယ်။ စားတယ်။
အဲဒီ့ ရေခဲမုန့်ကို အကောင်းလုပ်စားခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တွေကို ပြန်သတိရပါတယ်။
ရေခဲမုန့်ဆိုလို့ ကလေးအရွယ် ပြည်သူပိုင် မသိမ်းခင်က မန္တလေး ရှားမီး မုန့်တိုက်က ရေခဲမုန့်နဲ့ ရေခဲချောင်း စားခဲ့ဖူးတာလည်း ရေးတေးတေးမှတ်မိတယ်။ ၈၃ လမ်းပေါ်မှာ မှတ်တယ်။ ၂၄ လမ်းထောင့်လား၊ ၂၅ လမ်းထောင့်လားတော့ သေချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီ့မှာ ရှားမီး မုန့်တိုက် ရှိတာကို မန္တလေးမှာ ကျောင်းတက်နေစဉ်က ဖြတ်သွားဖြတ်လာ တွေ့တွေ့နေခဲ့ဖူးပေမယ့် ရေခဲမုန့်၊ ရေခဲချောင်းတော့ တစ်ခါမှ မစားဖြစ်တော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်က ရေခဲမုန့်တွေ ရေခဲချောင်းတွေ ကြိုက်လှတယ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ မကြိုက်ဘူးလည်း မဟုတ်ဘူး။ တွေ့တဲ့အခါ ကြုံတဲ့အခါ စားလိုက်တာပါ။ တစ်ခါတလေလည်း မစားချင်တော့ မစားဘူးပေါ့။ အဲဒါ ကလေးကတည်းကပါ။
နောက်တစ်ခုက ဒူးရင်းသီး။ ဒူးရင်းသီးအကြောင်းပြောတော့ အခု ရောက်နေတဲ့ ဆယ်တန်းကနေ တော်တော် နောက်ပြန်လှည့်ရတော့မယ်။ စိတ်ထင် ကျွန်တော် ငါးတန်းလောက်မှာ ဖြစ်မယ်။ အမေရယ်၊ အခုထက်ထိ မန္တလေးမှာ သက်ရှိ ထင်ရှားရှိနေဆဲ အမေ့အစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲ ကြီးကြီးရီရယ်က ကျွန်တော့်ကို ရွှေစက်တော်ကို ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ဘ၀လုံးမှာ အဲဒီ့တစ်ခါပဲ ရွှေစက်တော်ကို ရောက်ဖူးတာပါ။ ငါးတန်းလောက်လို့ ပြောရတာက အဲဒီ့တုန်းက ဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ထဲ မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ပုဆိုးနဲ့ ကလေးလေး ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ပြန်မြင်လာလို့ပါ။ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ မဟုတ်တော့ဘူးကိုး။ အဲဒီ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း စိတ်ထဲသာ ပြန်မြင်လို့ ရပါတော့တယ်။ အမေ ကျွန်တော့်ကို စိတ်နာနေတဲ့ အမေမဆုံးခင် ၁၇ နှစ်လောက် ကာလအတွင်းမှာ ရှိရှိသမျှ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်လို့ ဘာအစအနမှ မကျန်တော့ပါဘူး။
ခြေတော်ရာကို ဖူးခဲ့ရတာ၊ တောင်တက်ရတာ၊ ကြည်နေတဲ့ ရေထဲမှာ စိမ်ခဲ့တာတွေကို ရေးတေးတေး မှတ်မိတယ်။ ဘတ်(စ်)ကား အိုကြီးနဲ့ တမောကြီး သွားခဲ့ရတာကိုလည်း မှတ်မိတယ်။ အဲတုန်းက ကျွန်တော့်ကို ချစ်ခဲ့၊ အရေးပေးခဲ့တဲ့ မန္တလေးသူ အစ်မကြီးတစ်ယောက်ကိုလည်း မှတ်မိတယ်။ ဘယ်သူမှန်းတော့ မသိတော့ဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ကြင်ကြင်နာနာ နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံခဲ့တဲ့၊ ကျွန်တော့်ထက် ၁၅ နှစ်၊ နှစ် ၂၀ လောက်ကြီးတဲ့ အစ်မကြီးပါ။
အဲဒီ့ခေတ်က ခရီးသွားရတာ အတော်ကရိကထ များပါတယ်။ အိပ်ယာတွေ၊ စားစရာတွေပါ သယ်သွားကြရတာကိုး။ ထမင်း ဘာနဲ့ စားသလဲ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ဒူးရင်းသီးဆိုတာကို အဲဒီ့ ရွှေစက်တော်မှာ အလုံးလိုက် စမြင်ဖူးတာပါ။ အမေက အလွန်ကြိုက်သလို ကြီးကြီးရီကလည်း အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ သူတို့က ကောင်းလွန်းလို့ စားပါဆိုတာကို ကျွန်တော်က ခါးခါးသီးသီး ငြင်းပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိဘူး။ အဲဒီ့ အနံ့ပြင်းပြင်းကို ကျွန်တော် မခံနိုင်ဘူး။ သည်မတိုင်ခင် ဒူးရင်းသီးမမြင်ဖူးခင်က ဒူးရင်းယိုကို အခါအားလျော်စွာ စားခဲ့၊ ကြိုက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒူးရင်းသီးနဲ့ နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့ တွေ့တော့ ကျွန်တော် ခါးခါးသီးသီး ငြင်းတဲ့အပြင် အနံ့မခံနိုင်လို့ သူတို့နားမှာတောင် မနေမိတော့ပါဘူး။ အဲလောက်ကို ဆိုးတာပါ။ ကြီးကြီးရီကတော့ “သည်ကောင် ဘယ်လို ကောင်လဲ မသိဘူး”လို့ ထောမနာပြုပါတယ်။
ငယ်ငယ်က ကျွန်တော် အတော် ဂျီး(ကြေး)များပါတယ်။ ကလေးမို့ ငရုတ်သီး မစားနိုင်တာတော့ ထားပါတော့။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်း စားလေ့ စားထ မရှိဘူး။ နံနံပင်လည်း အနံ့မခံနိုင်တဲ့ အထဲမှာ ပါတယ်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်လေးကတည်းက တအားကြိုက်တာက ပူစီနံ (သတ်ပုံမှန် – ပူဒီနာ)။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလလောက်မှာ မန္တလေးက ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ကျွန်တော် ပူဒီနာ စားပုံကြည့်ပြီး ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေကြီးက အံ့သြမဆုံးလို့ အိမ်ကျတော့ သူ့ဇနီးကို ပြောပြ၊ သူ့ဇနီးကတောင် ကျွန်တော့် စာအုပ်မျက်နှာစာ တစ်နေရာမှာ ကျွန်တော် ပူဒီနာ စားပုံကို မှတ်ချက် လာရေးသွားခဲ့ဖူးပါပေါ့လား။
မုန်ညင်း၊ ဆလတ်ရွက်လိုဟာမျိုးတွေလည်း မခံစားနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကန်စွန်းရွက်ကြော်ဆိုလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ်စားဖူးတာ မဟုတ်ဘူး။ ကန်စွန်းရွက်ချဉ်ရည်ပဲ စားဖူးတာ။ ကန်စွန်းရွက်ချဉ်ရည်မှ အမေချက်တဲ့ လက်ပံခေါင်းတို့၊ ဆီးသီးခြောက်တို့ ထည့်ချက်ထားတဲ့ ကန်စွန်းရွက်ချဉ်ရည်ဆို လွှတ်ကြိုက်ပဲ။
ပြောတော့မှ လွမ်းတောင် သွားတယ်။ လက်ပံခေါင်းနဲ့ ဆီးသီးခြောက်ထည့်ချက်ထားတဲ့ ကန်စွန်းရွက်ချဉ်ရည် မစားရတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ မကတော့ဘူး ထင်တယ်။
အဲ… ဒူးရင်းသီးနံ့သာ မခံနိုင်တာဗျ။ တညင်းသီးကျတော့ ဘယ်လို ကြိုက်မှန်း မသိဘူး။ အမေကလည်း တညင်းသီး တအားစားတဲ့သူဆိုတော့ တညင်းသီးပြုတ်များဆိုရင် ဆီလေး ဆားလေးနဲ့ သွားရည်စာ စားသလို အားတိုင်း စားတတ်သဗျ။ ကြိုက်လည်း ကြိုက်သဗျ။ တညင်းသီး ဆားရည်စိမ်၊ တညင်းသီးနု မီးဖုတ်တွေလည်း တွယ်တာပဲ။ ငယ်ငယ်က ကျွန်တော် မစားတတ်တာ တညင်းဝက်။ အမေကတော့ စားတာပဲ။ ကျွန်တော် အသက် တော်တော် ရတဲ့အထိ တညင်းဝက်ကို မစားတတ်ခဲ့ဘူး။
ပြင်သစ်စာသင်တန်းကို ပြင်သစ်သံရုံး ယဉ်ကျေးမှု ဌာနမှာ သွားတက်တဲ့အချိန် အသက်က ၂၀ ကို ကောင်းကောင်း ကျော်တော့မှ အတန်းထဲက တစ်ယောက်က တညင်းဝက်ကို ဆီပူလေးထိုးပြီး ကြော်စားရင် ကောင်းတယ်လို့ ပြောတာနဲ့ စမ်းပြီး ကျော်စားမိတော့မှ လျှာလည်သွားတာဗျား။
ရယ်စရာ ပြောရဦးမယ်။ ကန်စွန်းရွက် ချဉ်ရည် စားရပေမယ့် ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ ပဲပင်ပေါက်ကြော် စတာတွေ မစားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့။ အဲဒါတင် မကဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ဘဲဥ၊ ကြက်ဥဟင်းလည်း တစ်ခါမှ ကောင်းကောင်း ကန်းကန်း မစားဖူးခဲ့ပါဘူး။ အမေကမှ အဲဒါတွေ မကြော် မချက်တာကိုးခင်ဗျ။ ဘာလို့ မချက်သလဲဆိုတော့ အဲဒါတွေက ဆင်းရဲသားတွေ စားတာမို့လို့တဲ့ဗျား။
ကြက်ဥဆိုရင် မကျက်တကျက်ကြော်ပဲ စားခဲ့ရဖူးတယ်။ ဟင်းအနေနဲ့ သော်လည်းကောင်း၊ မွှေကြော်အဖြစ် သော်လည်းကောင်း အင်မတန်မှ စားရခဲလှပါတယ်။ အဲ… နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်ရောက်ပြီး အိမ်မှာ သီးစုံ ပဲကုလားဟင်းချက်တဲ့အခါကျမှသာလျှင် အဲဒီ့ထဲမှာ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ အနည်းအပါး တွေ့ရပါတယ်။ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥကို ဒုံးချက်ထားတဲ့ အမေ့လက်ရာတော့ ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက် စားကို မစားခဲ့ဖူးဘူး။
မိသားစုက သုံးယောက်တည်း ရှိတာမို့ အဖေ ရုံးလုပ်တုန်းကလည်း လခ သိပ်မများပေမယ့် သားအမိ သားအဖ သုံးယောက် သားငါး မပြတ်စားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လောပိတလို နေရာမျိုးမှာတောင် သိပ် အစားမဆင်းရဲခဲ့ရပါဘူး။ အဲတော့လည်း အမေက ကြီးကျယ်တာပေါ့ဗျာ။ သူကြီးကျယ်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ ကြက်ဥဟင်း ကောင်းမှန်း မသိခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ပေါ့။
အဖေကတော့ သူ ငယ်ငယ်တုန်းက ငါးပိဖုတ်ကလေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့ ဖြစ်စေ၊ ထန်းလျက်နဲ့ ဖြစ်စေ ထမင်းစားခဲ့ရဖူးတဲ့ အကြောင်းတွေ မကြာခဏ ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဖေက ဆင်းဆင်းရဲရဲ ချို့ချို့တဲ့တဲ့ နေခဲ့ရလေတာကိုး။
အမေ့ဆီကတော့ အဲဒါမျိုးတွေ မကြားဖူးဘူး။ လက်ဖက်သုပ်နဲ့ ထမင်းစားတယ်ဆိုတာလည်း မရှိသလောက်ပဲ။ အဲ… တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အဲဒါက တစ်ခါတစ်လေ ညလယ်စာ အိမ်မှာ ဟင်းမကျန်တော့ရင် အဖေသင်ပေးတဲ့ ထမင်းစားနည်း။ အဲဒါကတော့ နို့ဆီလေးကို ဖျော်ပြီး ထမင်းပေါ် ဆမ်းစားတာဗျ။ အမယ်… အဲလိုကျတော့လည်း ၀င်တော့ သွားသားဗျ။
နောက်တစ်ခုက ထမင်းကို လက်ဖက်နဲ့ စားတဲ့ အကြော်စုံထည့်၊ ပုစွန်ခြောက်ထည့်၊ ဆီဆမ်း၊ ဆားဖြူး နယ်ပြီး ကြက်သွန်နီလေး တဂျွမ်းဂျွမ်းကိုက်စားတဲ့နည်း။ အဲဒါကျတော့ အဖေ့ဆီက ရတာလား၊ အမေ့ဆီက ရတာလား မသိတော့ဘူး။
ပြောတော့မှ သတိရလာလို့ လောပိတအထိ နောက်ကြောင်း နည်းနည်း ပြန်လှည့်လိုက်ဦးမယ်။ လောပိတမှာ နေတုန်းက သွားရည်စာက ပါးရှားတာမို့ အိမ်မှာ စိုက်တာလား၊ ပေါက်နေတာလား မသိတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး မှည့်မှည့် ထွားထွားကြီးတွေကိုလည်း သွားရည်စာအဖြစ် သကြားနဲ့ တို့တို့စားခဲ့ရတာလေးလည်း မှတ်မိလို့ နေပါသေးတယ်။ လောပိတ်ကို ခွာခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ အဲလို တစ်ခါမှ ပြန်မစားဖြစ်တော့ပါဘူး။ စားချင်စိတ်လည်း မရှိတော့ဘူး။
ဒူးရင်းသီးကို ဘယ်တုန်းက စပြီး စားနိုင်သွားသလဲဆိုတာတော့ မမှတ်မိလှတော့ဘူး။ သေချာတာကတော့ အသက် တော်တော်ကြီးမှပါ။ စားလို့ဖြစ်တယ်၊ စားတယ်၊ သည်လောက်ပဲ အကြိုက်ကြီး မဟုတ်ဘူး။ မြင်ရင်၊ အနံ့ရရင် မနေနိုင်တဲ့အထဲမှာ တစ်ခါမှ မပါခဲ့ဖူးဘူး။
အဲ… ဒူးရင်းသီးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မမေ့နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အဲဒါက ချစ်သူ့ရင်ခွင် ရှာပုံတော်ထဲမှာ ထည့်မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါ။ လူကတော့ ချစ်သူ့ရင်ခွင် ရှာပုံတော်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ “အသုဘမှာ တွေ့တဲ့ အချစ်”ပေါ့ခင်ဗျာ။ အဲ… အဲဒီ့အချစ်က တစ်ခါသားမှာ ဒူးရင်းသီး စားချင်ရှာပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ နှစ်လုံးလားမသိ၊ ၀ယ်တဲ့ပြီး နှစ်ယောက်သား ထိုင်စားခဲ့တာပါ။
စားတဲ့နေရာကြောင့် မမေ့နိုင်တဲ့ အဖြစ် ဖြစ်သွားတာပါ။
မမေ့နိုင်လောက်အောင် ဘယ်နားမှာ သွားစားကြတယ် မှတ်တုံး။
အဲတုန်းက သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်အဖြစ် ထားထားတဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၀င်းထဲက အဆောက်အအုံဘေး လှေကားထစ်မှာ နှစ်ယောက်သား ထိုင်စားခဲ့ကြတာ ခင်ဗျ။ သူ့အိမ် သယ်သွားပြီး စားလို့က နှစ်လုံးလောက်နဲ့က မလောက်ဘူးလေ။ သူ့အိမ်မှာက ဘောလုံးသင်း တစ်သင်းစာလောက် မိသားစုဝင်တွေ ရှိနေကြတာ၊ ကျွန်တော့်အိမ်ကျတော့လည်း သူ့ကို ခေါ်သွားလို့ မရဘူး။ အမေကမှ သူ့ကို မလိုလားဘဲကိုး။ အဲဒါနဲ့ လမ်းပေါ်တင် ကိစ္စပြီးလိုက်ကြရတာကလား။
အင်း… ပြန်ပြောရင် လွမ်းသေးတဲ့ သံယောဇဉ်နွမ်းကလေးပေါ့ ခညာ… 🙂
အဲ… အဲလိုသာ စားခဲ့တာ တကယ်က ကျွန်တော်က ဒူးရင်းသီးကို မက်မက်စက်စက် မရှိလှဘူး။ တွေ့တဲ့အခါ၊ ကြုံတဲ့အခါ စားချင်ရင် စားတယ်၊ မစားတာက များသဗျ။ အဲဒါ မနှစ်ကအထိပဲ။ ကျွန်တော့် အိမ်သူကလည်း ဒူးရင်းသီးကြိုက်တယ်၊ သူ့သား (ကျွန်တော်နဲ့ မွေးတာပါလေ 😛 ) ကလည်း ကြိုက်တော့ နှစ်တိုင်းလို စားတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အင်တင်ပါတင်၊ အလွန်ဆုံးမှ တစ်စိတ်လောက်ရယ်။ တစ်ခါတလေ လှည့်တောင် မကြည့်မိဘူး။
သည်နှစ်ကျမှ ဘာဖြစ်တယ် မသိဘူး။ ဒူးရင်းသီးကို စားချင်နေတယ်။ ကျွန်တော့်လိုပဲ ဒူးရင်းသီးကို အနံ့တောင် မခံနိုင်တဲ့ သမော်ဒီးကလည်း သည်နှစ်ကျမှ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ် မသိဘူး၊ မင်းသမီး နန္ဒာလှိုင့်အမေ ရောင်းတဲ့ ဒူးရင်းသီးတွေ သုံးလေးလုံး မကြာမကြာ ၀ယ်ဝယ်လာတယ်။ ကျွန်တော် မက်မက်စက်စက် ဖြစ်လာတယ်ဗျ။ အသက်ကြီးလာလို့ သွေးတောင်းလာတာပဲလား၊ သေခါနီးမို့လို့ မတည့်တာကို သွေးတောင်းတာပဲလား၊ ဘုရားမှ သိတော့မယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် မကြိုက်တာတွေ ကျန်သေးတယ်။ ပထမဆုံးက ဒန်ပေါက်။ ဒန်ပေါက်လည်း ကျွန်တော် မကြိုက်လှဘူး။ မကြိုက်ဆို ကြက်သားမှ ကျွန်တော် မကြိုက်တာကိုး။ နောက်တစ်ခုက ခေါက်ဆွဲကြော်။ အဲဒါကျ ၀က်သားနဲ့ ကြော်ကြော်၊ ကြက်သားနဲ့ ကြော်ကြော် မကြိုက်ဘူး။ ခေါက်ဆွဲရဲ့ အရသာကို မကြိုက်ခဲ့တာ။
ထောပတ်ထမင်း၊ အုန်းထမင်းကျတော့ ကြိုက်ပြန်သဗျ။ အုန်းထမင်းလေးနဲ့ ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်း အရည်သောက် ဟင်းလေးနဲ့များဆို တယ်ကြိုက်။ သရက်သီးသနပ်ကလေး၊ ပူဒီနာ နိုင်းချင်းလေးနဲ့များ လွေးရလို့ကတော့ လာစမ်းဆိုတဲ့ အထဲက။ အရင် မန္တလေး ဈေးချိုအဟောင်းရှိတုန်းက နာရီစင်ထောင့် ဈေးချို မြောက်ဘက်တန်းမှာဆို မနက်ပိုင်း အုန်းထမင်းနဲ့ ငှက်ပျောသီးကြော်၊ အုန်းထမင်းနဲ့ ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်း ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ ဈေးချိုကြီး ပျက်စီးသွားတာနဲ့အတူ အဲဒီ့ဆိုင်တွေလည်း ဘယ်လိုက်ရှာရမှန်း မသိတော့ဘူး။
အဲဒီ့ ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်းဟင်းဆိုလည်း မစားရတာ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက် ရှိပြီ။ အမေက အရင်က ချက်တတ်တယ်။ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကျတော့ အမေ့ကို ချက်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတော့ အလွဲ ချက်ပေးတယ်။ ဒါတင် မကသေးဘူး၊ ၀က်သားကို ပဲကြာဆံနဲ့ အလုံးလေးတွေ လုံးပြီး ချက်တဲ့ ၀က်သားလုံး အရည်သောက်ဟင်းဆိုလည်း အမေချက်တာက သိပ်စားကောင်းတယ်။ အဲဒါလည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ အမေ့ကို နှစ်ခါ၊ သုံးခါ ချက်ခိုင်းမိပြန်တော့ အလွဲ ချက်ပေးပြန်တယ်။
ကျွန်တော် သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ အမေ့စိတ်ကို သိတာပါ။ သူ့နည်းကို သူတစ်ယောက်တည်း သေရာ ညောင်စောင်းအထိ ယူသွားမယ်၊ သူ့ချွေးမ ကျွန်တော့်ဇနီး မရလိုက်စေရဘူးလို့ ဘုရားမှာတောင် သစ္စာဆိုသွားလေသလားပဲ။
ကျွန်တော်ကလည်း စားပဲ စားတတ်တာ၊ မချက်တတ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ ခံပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ ပဲကြာဆံနဲ့ ၀က်သားစင်းကောနဲ့ကို အလုံးအလုံးလေးတွေ ဖြစ်အောင် လုံးပြီး အရည်သောက်ကလေး ချက်တာကို ကျွန်တာ့်ဇနီး နည်းနည်း ကြိုးစားချက်တာ အမေ့လက်ရာကို မမီသည့်တိုင် အာသာတော့ အနည်းငယ် ပြေလာပါပြီ။
အဓိကက ဆီသတ်ပုံမှာ ကွာခြားတယ် ထင်တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဇနီးက ဗမာဆီသတ်နည်းနဲ့ သတ်တာ။ အမေ့ဟင်းက တလုပ်မဆလာနဲ့ ဆီမပါသလောက် ရေပေါလောနဲ့ ချက်ထားတာ။ သည်စာကို ဖတ်မိသူတွေထဲက အဲဒါမျိုးကို စားလည်း စားဖူး၊ နည်းလည်း သိတယ်ဆိုရင် ရေးပြကြစမ်းပါဗျာ။
အဲဒီ့ဟင်းက ထမင်းနဲ့ စားရုံသာမကဘူး၊ သည်တိုင်းစားရင်လည်း ကောင်းသဗျ။ မန္တလေးကြာဆံချက် စားသလို ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးထည့်၊ ငန်ပြာရည်၊ ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် ထည့်၊ သံပရာရည် ညှစ်ထည့်ပြီ စားရင်လည်း လွှတ်ကောင်းပဲခင်ဗျ။
ကချလာမဟုတ်သော မော်လမြိုင်သား ရှာပုံတော်
ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်းဟင်းကလည်း အရည်သောက်ပါပဲ။ အနီးစပ်ဆုံးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က မော်လမြိုင် ရောက်တုန်း မော်လမြိုင်ဈေးကြီးထဲမှာ စားခဲ့ရတဲ့ အမဲအူပြုတ်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ဗျ။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာ စားနေကျ ပေါက်ဖော်ကြီးရဲ့ အမဲအူပြုတ်က အဖြူထည်။ မော်လမြိုင်မှာ စားခဲ့ရတဲ့ အမဲအူပြုတ်က ငရုတ်ဆီရောင်လေးနဲ့၊ ဆီပြန်ဟင်းရောင်ဆိုပါတော့။ သို့ပေမယ့် ဆီက ပါလေကာပဲ။ အရည်သောက်။ အဲဒါကိုလည်း ကြက်သွန်နီ၊ ငန်ပြာရည်၊ ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့်၊ သံပရာရည်ထည့်ပြီး စားရတာဗျား။ ကောင်းချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပဲ။
နောက်ပိုင်း မော်လမြိုင်ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ရောက်ပေမယ့် အဲဒါ ဘယ်နား လိုက်ရှာပြီး စားရမယ် မသိဘူး။ မော်လမြိုင်သား မိတ်ဆွေ အနည်းအပါးကို မေးမိတော့လည်း အဲဒီ့မောင်တွေက ကချလာတွေ၊ ဘာမှ ကောင်းကောင်းကန်းကန်း မသိကြဘူး။ ဘာတုံး၊ မော်လမြိုင်က အစားဆိုတာ။ မော်လမြိုင်မှာ ဆိုင်ကောင်းကောင်း သိချင်ရင် မော်လမြိုင်သားကို မေးတာထက် တခြားတစ်မြို့တစ်ရွာက ကားသမားကို မေးတာကမှ ပိုသိနိုင်ပေဦးမယ်။ ကျွန်တော် မေးမိသမျှ မော်လမြိုင်သားတွေကတော့ ဘာဆို ဘာမှ မသိတဲ့ သူတွေချည်း ဖြစ်နေတယ်။
ရှိသေးတယ်။ မော်လမြိုင်သားတွေကို မေးလို့ မရတဲ့ လက်ဖက်ရည်။ အဲဒါက “အစိမ်းဖောက် လက်ဖက်ရည်”ဆိုတာ၊ အဲဒါလည်း မော်လမြိုင်မှာပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄-၅-၆ နှစ်လောက်က သောက်ခဲ့ရဖူးတယ်။ အဲတုန်းက သံဖြူဇရပ်က ပြန်လာရင်း လမ်းမှာ ကြုံတဲ့ဆိုင်ကို ကားသမားနဲ့ ၀င်သောက်တာ။ မော်လမြိုင်ရဲ့ လူစည်ကားရာ နေရာလို့ပဲ မှတ်မိတယ်။ ဘယ်မှာလဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အားပါး… ဆွေမျိုးမေ့အောင် ကောင်းသဗျ။
အစိမ်းဖောက်ဆိုတာက ဆိုင်မှာ ကြိုနှပ်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည် မဟုတ်ဘူး။ ၀ယ်သူက သောက်မယ်ဆိုတော့မှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နှပ်ပေးတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဗျာ။ နည်းနည်းတော့ စောင့်ရတယ်။ သို့ပေမယ့် မကောင်း ခံနိုင်ရိုးလားဗျာ။ အဲဒါလည်း နောက်ပိုင်း မော်လမြိုင် ရောက်တော့ ရှာမိပါတယ်။ ရှာရုံမက ကချလာ မော်လမြိုင်သားတွေကိုလည်း မေးမိပါတယ်။ မသိကြဘူးဗျ။
သည်စာကို ဖတ်မိတဲ့ “ကချလာ မဟုတ်သော” မော်လမြိုင်သားများ ရှိတယ်ဆိုပါရင် မော်လမြိုင်က အမဲအူပြုတ် ဆိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့ အစိမ်းဖောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကောင်းကောင်းကို နတ်လမ်းလေး ညွှန်ပေးကြပါဦး ခင်ဗျား။
ဈေးချို မြောက်ဘက်တန်းမှာ ရတဲ့ ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်းဟင်း၊ ချွေးမတော် နည်းမသိစေရဘူးလို့ သစ္စာဆိုသွားသော နည်းနဲ့ ကျွန်တော် လူပျိုဘ၀တုန်းက အမေ စိတ်လိုလက်ရ ချက်ချက်ကျွေးသွားတဲ့ ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်း ဟင်းဟာလည်း အဲဒီ့ မော်လမြိုင် အမဲအူပြုတ်လိုပဲ ဆီလည်၊ ရေလည် အရည်သောက် ဟင်းကောင်းလေး တစ်ခွက်ပါပဲ။ မော်လမြိုင် အမဲအူပြုတ်စားသလိုပဲ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ သံပရာရည်များနဲ့ အလွန် စားလို့ကောင်းပေါ့ခင်ဗျာ။ ရှောက်ရွက်ကလေးများပါ နိုင်နိုင်ဖြူးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်….
အင်း… သည်တစ်ပိုင်းကလည်း အရသာရှိသော စာကို ရေးမိပြန်ပြီ ထင်ပါရဲ့။ မပြီးသေးဘူးနော်။ ကျွန်တော် မကြိုက်တဲ့ စားစရာတွေ ကျန်သေးတယ်။ ဒန်ပေါက်နဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်အကြောင်း ပြောရင်း တန်းလန်းကနေ ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်းနဲ့ ၀က်သားကြာဆံလုံးဟင်းဘက် ရောက်သွားတာ။
နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့မှ မကြိုက်တာလေးတွေကို စကားလက်စသတ်ရင်း အခန်းကူးနိုင်အောင် အားထုတ်ပါတော့မယ်။
Win Pa Pa Ko ဖတ်ရင်းနဲ့ ဟိုဟာစားချင်သလိုလို ဒီဟာစားချင်သလိုလို ဖြစ်လာပြီ ဆရာရေ 🙂
Nge Thar မကြီးကြီးလမ်း (ကျွန်းတောလမ်း နဲ့ ရှမ်းလမ်းကြား) ပါဆရာ စမ်းချောင်းလမ်း ဟုတ်ဘူးခင်ဗျ စမ်းချောင်းလမ်းက ဗားကရာလမ်းနဲ့ အပြိုင် ပဒုမ္မာကွင်း တစ်ဖက်ခြမ်းက လမ်းခင်ဗျ ရှမ်းလမ်းကို အခု ဗဟိုလမ်းလို့ခေါ်နေပါတယ်
ATK သန်းဦး… သန်းဦး… ကျွန်တော်က ရှမ်းလမ်းကို မေ့နေတာ။ စမ်းချောင်းသူဆိုလို့ တစ်ဘ၀လုံး တစ်ယောက်ပဲ ကြိုက်ဖူးတော့ အဲဒီ့ဘက်တေ ကျွမ်းဖူးဂျ 😛 ပြင်လိုက်ပါပြီခည
Nge Thar တိန်
Nge Thar ဝက်သားလုံး ကြာဇံချက်က လွယ်ပါတယ် ရေကို ကြက်သွန်ဖြူရယ် ကြက်သွန်နီရယ် ဂျင်းအတက်လိုက် အရွယ်အနေတော်ကို ဆားနဲနဲနဲ့ ရေပွက်ပွက်ဆူအောင်တည် ပွက်ပွက်ဆူမှ ဝက်သားစင်းကော (ငရုပ်ကောင်း၊ ဆား ၊ ပဲငံပြာရည် စတာနဲ့ နယ်ပြီးသား) ကို လုံးပြီးထည့် အချိုရည် ကျလောက်ရင် ပဲကြာဇံ ရေစိမ်ထားတာထည့် ပဲကြာဇံ ကျက်ရင် ငရုပ်ကောင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူအစိမ်း၎-၅တက်လောက် ရောထောင်းထားတာကို ခပ် ကြိုက်တတ်ရင် တရုပ်နံနံပင် ခပ် ပြီးပြီ စားလို့ရပြီ (ကျွန်တော်တို့ စားနေကျနည်းပြောပြတာနော် တူလောက်မယ် ထင်လို့ )
ATK တူဝူးဂျ။ အမေချက်တာက ၀က်တားကို လုံးကတည်းက ပဲကြာဇံတွေပါ ထည့်လုံးတာ။ မရိုတေ့စကား ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ တားအမိက အဲဒီ့ဟင်းကို ဂွေးကျိဟင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂွေးကျိမှာ အမွှေးတွေ ငုတ်စိ ပတ်လည် ထွက်နေသလိုမျိုးမို့ပါ။ ပဲကြာဇံနဲ့ ၀က်သားလုံးကို ရောချက်တာ မဟုတ်ဘူး။ ၀က်သားလုံးမှာကိုက ပဲကြာဇံတွေ ထည့်လုံးတာ 😛
Nge Thar ဟင်းရည်ကရော အဖြူထည်ပဲလား
ATK အဖြူထည်မှုတ်ဖူး၊ ညိုညိုလေး။ ၀က်သားလုံးလေးကလည်း ညိုညိုရဲရဲ၊ ဟင်းရည်ကလည်း အဲဒီ့ ခါလာပဲ
Nge Thar အခြား ဘာအရွက်တွေ ပါသေးလဲဆရာ
ကျွန်တော်တို့ ချက်တဲ့ ဝက်သားလုံး နောက်တစ်မျိုးရှိတယ် သူက အရည်နဲ့ ဝက်သားလုံးပဲ ကျန်တာဘာမှ မပါဘူး ဝက်သားလုံးကိုတော့ တရုပ်မြက် ကျို့ချိုင် ကိုစဉ်းထားတာနဲ့ ရောနယ်ပါတယ်
ATK ဘာအရွက်မှ မပါဘူးဗျ။
Sanda Hlaing စားစရာကို အော့အော့တွေဖြစ်အောင် ပြောနိုင်တာ အဲ့အူးးးးအူးးးပဲ ရှိမယ်… 🙂
ATK ပညတ်တွေပါလေ… ပရမတ်က ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး ချားဒါဗျဲဟာ 😛
Sanda Hlaing ငှင်င်င်… ကြက်မောက်သီးလောက်လုပ် ရသားနဲ့ ဥပမာပေးစာရှားလို့… 😦
Nge Thar ဟီး အဲလောက်ဆို ချက်တတ်ပြီ ထင်တယ် ဟုတ်တယ်ဆရာ ဘာဆိုဘာမှ မထည့်ဘူး အသားလုံးကို ရေနည်းနည်း ဆီနည်းနည်း နဲ့ ပြုပ်ပြီး ရေခန်းမှ မီးအေးအေးနဲ့ ဆီလေးနဲ့ အရောင်ရအောင် ကြော်ပြီး အရည်သောက်လို့ရအောင် ရေပြန်ထည့်တာ ကျွန်တော်တို့ မုံရွာ ဝက်အူချောင်း အလုံးကို ပြုပ်ကြော် လုပ်သလိုမျိုး
Yamin Nyi Nyi ဗိုက်စာလာပြီ 😀
ATK အန်တီလေးးးး ဆလိမ်နဲ့ ဆာပါဗျ။ စလုံးနဲ့ မစာပါနဲ့။ ဆာတာကို တစာစာ ဟစ်ကြွေးနေမယ့်အစား အစာလေးကို အဆာပြေ စားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဆာတာလည်း ပြေ၊ အစာလည်း ကျေပါလိမ့်မဗျားးးး 😀
Yamin Nyi Nyi ဗိုက်ဆာလာပြီ 😀 😉
Saw Zar Li ဒါမှ ရသစာပေစစ်စစ် ရှလွတ် 😛
စု စုအေး မကြီးကြီးလမ်းဒိန်ချဉ်ကို သောက်ဖူးတယ်ဆရာ အခုတော့ရှိသေးလားမသိဘူး ကျမ သောက်တုန်းကတော့ ဆိုင်ကတော်တော်ကျယ်တယ် စားပွဲ လေးငါးလုံး ချလို့ရတယ် ဒိန်ချဉ်ဆရာကြီး မျက်နှာထားဆိုးတာလဲမှတ်မိတယ် ဒါပေမဲ့ ဆရာ့တုန်းက လူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါ့ တ်ခမ်းမွှေးထူထူကြီးပါတာမှတ်မိနေတယ်
ATK နောင် ချမ်းသာသွားလို့ ဆိုင်ချဲ့တာလား မသိဘူး။ နှုတ်ခမ်းမွေးကြီးတော့ ခုမှ မြင်လာတယ်။
စု စုအေး သူ့ဆိုင်က အရမ်းရောင်းကောင်းတာတော့မှတ်မိတယ် ဘယ်လောက်လူများများ အရမ်းကြီးကြာအောင်မစောင့်ရတာလဲမှတ်မိတယ် ဒိန်ချဉ်ကို ကလေးသောက်တဲ့ ခွက်သေးက ကိုင်းမပါလို့ မကျေနပ်တာလဲမှတ်မိတယ် ဟီးဟီး
Sanda Thant ဖတ်ရ တယ်မြိန်တာပဲဆြာ
ဇွန်လ ၁ ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ညနေစောင်းရင် ခရီးရှည်ထွက်ပါဦးမယ်။ ကျွန်တော့် အစုတ်ထုပ်လည်း အဲဒီ့အခါကျ ခဏနားရမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့၊ ပိတ်သတ်ကြီးကို ဒါ့ပုံတွေနဲ့ ဆက်လက် နှိပ်စက်သွားမှာပါ။)
အခုတော့ ပြီးသလောက် တစ်ပိုင်း ဆက်တင်လိုက်ပါတယ်။
ရေခဲမုန့်အကြောင်း ပြောတုန်းက ကျန်သွားတာ တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါက ကူ(လ်)ဖှီဆိုတာပဲ။
ရန်ကုန်ရောက်မှ ကြားဖူး၊ စားဖူးသွားတာ။ အတော်ကောင်းပဲ။ (ဗမာနာမည်… အဲ… မွန်နာမည် ဖြစ်လျက်နဲ့ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းလို့ မျိုးချစ်စိတ် တလွဲရှင်သန်ပြီး အခြောက်တိုက် နာမည်အပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့) မောင်ထော်လေးလမ်းနဲ့ ဖရေဇာထောင့်က ဆိုင်မှာ စ စားဖူးခဲ့တာ ကောင်းကောင်း မှတ်မိနေတယ်။ လမ်းတစ်ဖက်ခြမ်း (အနောက်ဘက်ခြမ်း)မှာက ဟိုထဲ(လ်) ဒ, ဆစ်ထီး ဆိုတာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ အဲဒီ့ နေရာတွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။
ရန်ကုန်ရောက်စ ၁၉၆၇ ၀န်းကျင်လောက်မှာပဲ စားဖူးခဲ့ပြီး အဲဒီ့ ကူ(လ်)ဖှီနဲ့ အဝေးကြီး ဝေးသွားခဲ့တာ အတော်ကြာတယ်။ အဲတော့လည်း မေ့တာပေါ့။ အဲဒီ့ဆိုင်က ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေအထိ ရှိနေခဲ့သေးပေမယ့် မစားဖြစ်တော့ဘူး။ ဘာကြောင့်မှန်းလည်း စဉ်းစားလို့တောင် ပေါ်မလာတော့ပါဘူး။ သည်လိုပဲ သူ့အလိုလို မစားဖြစ်တော့တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီး ကျွန်တော့်မှာ သားတွေ သမီးတွေတောင် ရလာတော့မှ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကုလားကြီးတစ်ယောက်က လာအော် ရောင်းနေတော့မှ ကူ(လ်)ဖီကို ပြန်စားဖြစ်တယ်။ အဲတော့လည်း ငယ်ချစ်နဲ့ တွေ့ရသလိုပါပဲ။ မလိုင် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်နဲ့ အတော် စားလို့ ကောင်းပေတာပဲ။
သည်အကြောင်း ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ရေးမယ်လုပ်တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သမီးက ကူ(လ်)ဖီ ၀ယ်လာပြန်တယ်။ “လမ်းသင့်တဲ့ ခဖှေး”လို့ ဘာသာပြန်ရင် ရနိုင်မယ့် ဆိုင်က ၀ယ်လာတာပါ။ နို့မလိုင် ကူ(လ်)ဖီက နှစ်ခု၊ ချောခလက်(ထ်) ကူ(လ်)ဖီက နှစ်ခု။ ချောခလက်(ထ်)တော့ သားစားတဲ့အထဲက မြည်းကြည့်တာ ခံတွင်း မတွေ့လိုက်ဘူး။
ရန်ကုန်မှာ စားလို့ မကောင်းတာတွေ
ကူ(လ်)ဖီပြီးရင် တစ်ဆက်တည်း ပြောရမှာက ဖှာလူဒါ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက စားရတဲ့ အထဲမှာ ကောင်းကောင်း မပါခဲ့သလိုပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ သိပ်အမှတ်ထင်ထင် ရှိမနေဘူး။ မန္တလေးမှာ နေတုန်းက ဆယ်ခါ့ရံ တစ်ခါလောက် စားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အုန်းသီးကို ခြစ်ပြီး ထည့်ပေးတာ မှတ်မိနေတယ်။
ဖှာလူဒါရယ်လို့ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ဖြစ်လာတာက တပ်မတော်ကို စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားနဲ့ ဆရာကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ကြီး ရန်ကုန်မှာ ရွှေလမင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင် စဖွင့်တဲ့ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်ကျတော့မှပါ။ သူက “အညာ ဖွာလူဒါ”ဆိုပြီး ကြော်ငြာရောင်းချခဲ့တာကိုး။ ဒါပေသည့် အဲဒါလည်း တစ်ခါလား၊ နှစ်ခါလားပဲ စားဖူးတယ်။ သိပ် ခံတွင်း မတွေ့ဘူး။ အဲဒီ့အချိန်မှာ သူ့ဆိုင်မှာ မက်မက်ခြိုက်ခြိုက် စားဖြစ်ခဲ့တာက ပဲပလာတာ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ စားရသမျှ အဆင်မပြေဆုံးက အဲဒီ့ ပလာတာတွေ၊ ထပ်တစ်ရာတွေပါပဲ။ ဘာကွာတာလဲ မသိဘူး။ ဂျုံနယ်တာပဲ ကွာတာလား၊ ဘာလားတော့ မသိဘူး။ မန္တလေးက လမ်းဘေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ခပ်စုတ်စုတ်က ကြော်တဲ့ ထပ်တစ်ရာလောက်တောင် အရသာ မရှိဘူး။ နောက်တစ်ခုက ပဲနဲ့ စားတဲ့အခါ အဲဒီ့ပဲတွေရဲ့ အရသာကလည်း ရန်ကုန်ပဲကိုက လွဲနေတာလားတော့ မသိဘူး။ မန္တလေးအပါအ၀င် အထက်ဗမာပြည်မှာ စားရတာမျိုးလောက် စေးစေးပိုင်ပိုင် ဆိမ့်ဆိမ့်အိမ့်အိမ့် မရှိလှဘူးဗျ။
မန္တလေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကလေးဘ၀ မမေ့နိုင်စရာက ရေခဲပလုတ်တုတ်ပါ။ မန္တလေးမှာတော့ ရေခဲပလုတ်တုတ်ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ ရေခဲခြစ်ပေါ့။ မန္တလေး ရေခဲ ပလုတ်တုတ်ကလည်း အကျဗျ။ အုန်းသီးကို အမျှင်အမျှင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ရေခဲတွေကြား ညှပ်ထည့်ပေးထားတယ်။ ကလေးကြိုက် သကြားရေကို အနီ၊ အစိမ်း၊ အ၀ါအဖြစ် ဆမ်းပေးတယ်၊ နို့ဆီလည်း ဆမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ခုခေတ်လိုဆိုရင်ဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ တစ်စက်မှ မညီညွတ်တဲ့၊ ကလေးတွေ မစားအပ်တဲ့ စားစရာပေါ့ဗျာ။ မန္တလေးဆိုတာက ဖုန်ကလည်း ထူထူ၊ သကြားရည်ကို ဆေးဆိုးထားတာကလည်းပါ၊ နို့ဆီကိုလည်း အရင်းအတိုင်း ထည့်ပေးထားလေတော့ကာ ဘယ်လိုလုပ် ကလေးနဲ့ သင့်မှာတုံးနော်။ ကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ တွယ်တာပါပဲ။ ဘာမှလည်း ထူးထူးထွေထွေတွေ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်က ကူးစက်စေတဲ့ ရောဂါဘယပဲ နည်းတာလား၊ ရှိနေတဲ့ ရောဂါဘယတွေကို မရှာတတ်သေးလို့လားတော့ မသိဘူး။
မအေတွေ့ ပါးစပ် လွှမ်းမိုးပုံ
တကယ့်တကယ်ကျတော့ ကျွန်တော်က အဲလို အချိုတွေထက် အချဉ်တွေကို ပိုကြိုက်တာ။ အချဉ်ထုပ်များတော့ ကြိုက်သလောက်လာ၊ စားမယ်ဆိုတဲ့အထဲက။ မန္တလေး အချဉ်ပေါင်းသည်များဆီက အချဉ်ပေါင်းစုံဆိုလည်း ကျွန်တော့် အသည်းစွဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာကလား။ တော်တော်လည်း စားနိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆီးသီး၊ မရမ်းသီး၊ သရက်သီး၊ သင်္ဘောဆီးဖြူသီး၊ ကယားပြည်နဲ့ တောင်ကြီးမှာ နေတုန်းကဆို ပင်စိမ်းသီး၊ ရန်ကုန်ရောက်တော့ အချဉ်ထုပ်တွေထဲမှာ ရှောက်သီး၊ သံပရာသီးတောင် ပါလာတယ်။ ဘာလာလာ ကျွန်တော် တွယ်တာပဲ။ အဲလောက် အချဉ်ပေါင်းကို ကြိုက်တာ။
ဆီးဖြူသီးဆိုလည်း စားတာပါပဲ။ တန်ဆောင်မုန်းလဆိုရင် အမေက ဆီးဖြူသီးထောင်းကို ဟင်းတစ်မည်အဖြစ် ထည့်တတ်သလို ဆီးဖြူသီးပြုတ်နဲ့ ငါးပိကြော်ကိုလည်း သွားရည်စာအဖြစ် ကျွေးတတ်ပြန်သေးတယ်။ စားတာပဲ။
အမေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် မန္တလေးသူ အမေ့ရဲ့ အိမ်မှာ လက်ဖက်ကလည်း ဘယ်တော့မှ မပြတ်ဘူး။ အမေကလည်း နေ့စဉ်နီးပါး စားပါတယ်။ အမေစားတော့ ကျွန်တော်လည်း စားရပါတယ်။ ဧည့်သည်လာလည်း လက်ဖက်တစ်ပွဲကတော့ ရှေ့ရောက်လာတာပါပဲ။ အဲဒါကတော့ ချစ်စရာ မြန်မာဓလေ့လို့ ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော် အထက်ကာရီက ရွှေဘိုနယ်ထဲက အတော်ခေါင်တဲ့ ရွာတစ်ရွာကို ရောက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စီးသွားတဲ့ ကားက ပျက်လို့လား၊ ဘာလားတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ လမ်းဘေးက အိမ်တစ်အိမ်မှာ ခဏ ၀င်နားရပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ ချက်ချင်းရောက်လာတာက လက်ဖက်ပွဲနဲ့ ရေနွေးကြမ်းပါပဲ။
အထက်အညာမှာတော့ ဧည့်သည် စားသည်ဖြစ်စေ၊ မစားသည်ဖြစ်စေ ဧည့်သည်လာပြီဆိုတာနဲ့ လက်ဖက်ပွဲက အမြဲ အသင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ရေနွေးကြမ်းလည်း အလားတူ။
လက်ဖက်နဲ့ ရေနွေးကြမ်း တည်ခင်းတဲ့ ဓလေ့ဟာ ချစ်စရာ မြန်မာ့ဓလေ့ကလေးပါ။ သို့ပေမယ့် အဲဒီ့ ဓလေ့က ကျွန်တော့်အိမ်မှာတော့ မရှိဘူးဗျ။ အတော် အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလှတယ်။
မရှိဆို ကျွန်တော့်အိမ်သူကမှ မေမေ့လို လက်ဖက်ကို မက်မက်စက်စက် မစားတတ်ရှာပဲကိုး။ သူ မစားတတ်ရှာဆို သူ့အမေကြီးကလည်း မက်မက်စက်စက်မှ မရှိရှာတာကိုး။ အဲတော့ သူ့အစ်မတွေရဲ့ အိမ်တွေမှာလည်း လက်ဖက်က အရံသင့် ရှိမနေတတ်ဘူး။ တော်တော်တော့ ဆန်းတယ်ဗျ။
အမေတွေရဲ့ အစားအသောက်ပုံစံက သားသမီးတွေကို လွှမ်းမိုးထားပုံ ရတယ်လို့တောင် ကောက်ချက်ချရမလို ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အချဉ်ထုပ်တွေ၊ အချဉ်ပေါင်းတွေ စားတတ်တာက မေမေ့ဆီက ရတာပါ။ ကျွန်တော့် ယောက္ခမကြီးကတော့ အလွန် အချဉ်ကြောက်ပါတယ်။ မချစ်စု သရက်သီးက ကျွန်တော်တို့ လျှာမှာ ချိုချဉ်လေးပါ။ အဲဒါမျိုးဆိုရင် ကျွန်တော့် ယောက္ခမကြီးအတွက်က အလွန်ချဉ်နေပါပြီ။ အဲတော့ သူ အချဉ်ထုပ်တွေ၊ အချဉ်ပေါင်းတွေကို မမက်တာ သိပ်သေချာပါတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော့်အိမ်သူလည်း အချဉ်ထုပ်၊ အချဉ်ပေါင်းကို စားလေ့စားထ မရှိဘူးဗျ။ လက်ဖက်လည်း အဲလိုပဲ နေမှာပေါ့လေ။
ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့ မညားခင် သူတို့ရဲ့ အလှူတစ်ခုမှာတော့ ထုံးစံမပျက်အောင် လက်ဖက်ပွဲ ပါလာပါတယ်။ အဲဒီ့ လက်ဖက်ပွဲထဲမှာ ပါမလာတာက ပုစွန်ခြောက်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်က လက်ဖက်ပွဲပြင်ရင် ပုစွန်ခြောက်က ဇာတ်လိုက်ကျော်ဆိုတော့ လွမ်းစရာလေးတွေ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ခင်ဗျာ။
စကားစပ်လို့ ပြောရရင်တော့ လက်ဖက်ကလေးကို ငါးကျည်းခြောက်ကလေးနဲ့ စားရင်လည်း အလွန်ကောင်းကြောင်းပါခင်ဗျား။
ကျွန်တော်ကတော့ မေမေ့သားပီပီ လက်ဖက်ကို ဘယ်လောက် ကြိုက်သလဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လကျော် သြစတြေးလျကအပြန် ဘန်ကောက်လေဆိပ်ရောက်တော့ ကျွန်တော့်အိမ်သူကို လှမ်းဖုန်းဆက်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ လက်ဖက်သုပ်စားချင်တဲ့အကြောင်း ကြိုမှာထားမိခဲ့တဲ့ အထိပါပဲ။
အစားအသောက်တွေအကြောင်း သည်နားမှာ တစ်ခန်းရပ်လို့ ကျွန်တော့် ဆယ်တန်း ပထမနှစ်ဆီ ပြန်သွားလိုက်ကြပါဦးစို့။
တစ်မတ် ငါးမူး တစ်မူး တစ်ပဲ
အဲဒီ့အချိန်က ကျွန်တော်ဟာ စာအုပ်ဖတ်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကို အသားကုန် လုပ်ပါတယ်။ စာအုပ်က စာအုပ်အငှားဆိုင်က ဖတ်တာပေါ့။ ရုပ်ရှင်ကတော့ ရုံမှာ သွားကြည့်ရတာပါ။ အိမ်က ပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးနဲ့ ကျွန်တော် ကြည့်ချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကား အရေအတွက်နဲ့က မမျှတော့ ကျွန်တော့်မှာ (အဲဒီ့အချိန်က) အနိမ့်ဆုံး အတန်းဖြစ်တဲ့ သုံးမတ်တန်း (၇၅ ပြားတန်း)က ကြည့်ရပါတယ်။
အခုခေတ် လူငယ်တွေက အကြွေ မကိုင်ဖူးရှာတော့ တစ်မတ်တွေ၊ ငါးမူးတွေ၊ သုံးမတ်တွေ မသိကြတော့ဘူး။ မကြာသေးခင်ကမှ ကျွန်တော့်သားရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးက မေးလာတော့မှ သူတို့် သည်အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ မယဉ်ပါးမှန်း သတိထားမိပါတယ်။
တစ်မတ်ဆိုတာ တစ်ကျပ်ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံကို ခေါ်တာပါ။ ငါးမူးဆိုတာက တစ်ကျပ်ရဲ့ တစ်ဝက်၊ သုံးမတ်ဆိုတာက တစ်ကျပ်ရဲ့ လေးပုံ သုံးပုံပေါ့။
အဲဒီ့မှာ ပြဿနာရှိတာက တစ်ကျပ်ဟာ ဘယ်နှပြားရှိဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လူဖြစ်တဲ့ ခေတ်မှာတော့ တစ်ကျပ်မှာ ပြား ၁၀၀ ရှိသွားပါပြီ။ အဲတော့ တစ်မတ်ဟာ ၂၅ ပြား၊ ငါးမူးဟာ ပြား ၅၀၊ သုံးမတ်က ၇၅ ပြားပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ရှေ့က မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ အဖေတို့ မျိုးဆက်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ငွေကြေးကို သုံးစွဲခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ့ ငွေ (အမှန်တော့ ရူပီး) တစ်ကျပ်က ဒဿမ စနစ်ကို မပြေင်းခင်မှာ ၆၄ ပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲတော့ တစ်မတ်က ၁၆ ပြား၊ ငါးမူးက ၃၂ ပြား၊ သုံးမှတ် ၄၈ ပြားပေါ့။ အဲဒီ့မှာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ပိုလာတယ်။ အဲဒါက တစ်မူးဆိုတာပါ။ ပိုက်ဆံတစ်မူးဆိုတာ တစ်မတ်ရဲ့ တစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့ ရှစ်ပြားကို ပြောတာဖြစ်သွားပါတယ်။ နှစ်မူးဆိုရင် တစ်မတ်ပေါ့ဗျာ။ ငါးမူးဆိုရင် ပြား ၄၀ မဟုတ်တော့ဘဲ တစ်ကျပ်ရဲ့ ထက်ဝက် ၃၂ ပြား (၀ါ) လေးမူးပဲ ရှိနေတာတော့ ကျွန်တော်မျိုးလည်း မလျှောက်တတ်တော့ဘူး။
သည်နေရာမှာ အမေ့ လက်သုံး ဥပမာတစ်ခုကိုလည်း မမေ့မလျော့ ထည့်ပြော လိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ “အတူတူနဲ့ အနူနူပဲ”၊ “တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဘာမှ မကွာဘူး”လို့ ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာ မန္တလေးသူ ကျွန်တော့်အမ ပြောတတ်တဲ့ ဥပမာက “တစ်မူးနဲ့ ရှစ်ပြား၊ ဘာမှ မကွာဘူး”ဆိုတာပါပဲ။ ရှစ်ပြားကိုလည်း တစ်မူး ခေါ်တာမို့ တစ်မူးနဲ့ ရှစ်ပြားဟာ တန်ဖိုးချင်း တူပါတယ်၊ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ မသာပါဘူး။ “သူမသာ ကိုယ်မသာ”ဆိုတာမျိုးကို ပြောတဲ့အခါ အမေက အဲလို ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ့မှာ ယနေ့ထက်တိုင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဇာတ်ရှုပ်တာက ရွှေအလေးချိန်တွက်ရာမှာလည်း ပဲတွေ၊ မူးတွေ ပါလာပြန်တာပါပဲ။ အဲဒါကျတော့ တစ်ကျပ်မှာ ၁၆ ပဲ ရှိပြန်သဗျ။ နှစ်ပဲကို တစ်မူး၊ ၂ မူးကို တစ်မတ်၊ ၂ မတ်ကို ငါးမူး၊ နှစ်မူးကို တစ်ကျပ်ဆိုပြီး ရှိတာမို့ တစ်မူးက ၂ ပဲ၊ တစ်မတ်က ၄ ပဲ၊ ငါးမူးက ၈ ပဲ၊ တစ်ကျပ်က ၈ ပဲ ရှိပြန်သပေါ့။ ရွှေမှာက ထပ်ဇာတ်ရှုပ်ပြန်တာက တစ်ပဲမှာ ရှစ်ရွေးဆိုတဲ့ အချိန်အတွယ်တွေပါ ပါလာပြန်တာပဲ။ ဆိုတော့ ရွေးနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် တစ်ကျပ်ဟာ ၁၂၈ ရှိသွားတော့တာပေါ့။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ရွှေသမားတွေသာ မေးကြည့်ပါတော့ဗျာ။
အဲဒီ့ အတိုင်းအတာ တွက်ချက်ပုံက လက်သမားတွေရဲ့ တစ်လက္မ ၁၆ စိပ်နဲ့ အမျိုးတော်သလားတောင် မသိဘူး။ တချို့ပေတံတွေမှာ ၁၆ စိပ်နဲ့ 16th ဆိုပြီး ပါတာ သတိထားမိကြလား မသိဘူး။ မြန်မာလက်သမား အများစု သုံးတဲ့ ပေတံမှာလည်း အဲဒီ့ အတိုင်းအတာတွေ ပါသလို တစ်မတ်၊ တစ်မူးဆိုတဲ့ စကားတွေလည်း ကြားရမှာပါ။ သူ့ကျတော့ ငါးမူးက ရှစ်စိပ်၊ တစ်မတ်က လေးစိပ်ရှိနေပြီး တစ်မူးကျတော့ တစ်မတ်ရဲ့ တစ်ဝက် နှစ်စိပ်ရှိပါတယ်။ တစ်စိပ်ကို တစ်ပဲလို့ ခေါ်တယ် ထင်တယ်။ သေချာချင်ရင် ဒါလည်း လက်သမားတွေကိုသာ မေးကြည့်ပါခင်ဗျား။
အချင်အတွယ် အတိုင်းအတာတွေက တော်တော်လည်း ဇာတ်ရှုပ်ပေတာပဲ။ ဂါလံရယ် လီတာရယ်၊ ဗြိတိသျှ စနစ်ရယ်၊ မက်ထရစ်စနစ်ရယ်၊ ဖာရင်ဟိုက်ရယ်၊ ဆယ်ဆစ်ယပ်(စ်)ရယ် အတော့်ကို ဇယားရှုပ်တာကလား။ အဲဒီ့ထဲမှာက မြန်မာက မြန်မာစနစ်နဲ့ တွက်ချက်တာတွေ၊ ရှေးထုံးအတိုင်း တွက်ချက်ဆဲတွေပါလာတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ခါ အတော် အူချာလည်နေရတယ်။
အမှန်တော့ သုံးမတ်တန်းက ရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်း ပြောရင်းနဲ့ သုံးမတ်ကို ရှင်းပြတာပါ။
ပြာတွေတောင် လွင့်တော့မယ့် အခြေအနေ
လွမ်းတော့ လွမ်းစရာ ကောင်းသားဗျ။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်က အကြွေကို တွင်တွင် သုံးနိုင်ခဲ့သေးတာကို။ တစ်ပြား၊ နှစ်ပြားကို သုံးလို့ မရခဲ့ပေမယ့် ငါးပြားပေးရင် ဘတ်(စ်)ကား နှစ်မှတ်တိုင်စာလောက် စီးလို့ရတဲ့ ခေတ်ကို ကျွန်တော်တောင် ကောင်းကောင်းမီ လိုက်ပါသေးတယ်။ အလားတူပဲ၊ ပြား ၆၀ ပိုက်ဆံအကြွေ၊ ပေးလိုက်စမ်းပါ သားတို့အမေဆိုတဲ့ သီချင်းထဲကလို သုံးဘီးကားစီးရင်လည်း မီတာချိုးတဲ့ စနစ်ရဲ့ အဖျား အနားလေးလည်း မီလိုက်သေးတယ်။
ပြောရတာတော့ မကောင်းဘူး။ ဦးစံလင်းဆိုတဲ့ လူကြီးရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ “လဲလှယ်ခွင့်ရှိကြောင်း အာမခံသည်”ဆိုတဲ့ စာတန်းပါ မြန်မာ ငွေစက္ကူများရဲ့ လက်ထက်က မြန်မာ ကျပ်ငွေကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ပေါက်ဈေးအတိုင်း လဲလို့ ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲတုန်းက မြန်မာကျပ်က စတာလင် ငွေကြေး နယ်ပယ်မှာ ရှိခဲ့ပေတာကိုး။
အသေးစိတ်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ လည်ပတ်နေတဲ့ ငွေကြေး ပမာဏနဲ့ ညီမျှတဲ့ ရွှေတွေကို အင်္ဂလန်က ဘဏ်မှာ အပ်နှံထားရတယ်ပေါ့။ အဲတော့ ငွေစက္ကူတွေကို ရိုက်ချင်တိုင်း ရိုက်လို့ မရဘူး။ ပြည်တွင်းမှာလည်ပတ်နေတဲ့ ငွေပမာဏထက် တိုးရိုက်ချင်ရင် နောက်ထပ် ရွှေသား အပေါင်ထားရတဲ့ စနစ်လို့ ပြောရမလားပဲ။ အဲတော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွင်းက ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု နည်းပါးအောင် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဟဲ… ကိုနေ၀င်း လက်ထက်ကျတော့ ထင်ရာ အကုန်လုပ်ပစ်တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေး ဘာညာ၊ အကြီးကြီးတွေ အော်ဟစ်ပြီး စတာလင် ငွေကြေးနယ်ပယ်က ခုန်ထွက်လိုက်တယ်။ အင်္ဂလန်မှာ အပေါင်ထား ထားတဲ့ ရွှေတုံးကြီးတွေကိုလည်း ပြန်ယူလိုက်တယ်။ အဲဒီ့ ရွှေတွေ ဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတာလည်း ပွင့်လင်း မြင်သာမှု အင်မတန်ရှိတာဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိတော့ဘူး။ အကုန်လုံး စုပ်စ၊ မြုပ်စပျောက်။
တိုင်းပြည် စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကတော့ အများသိတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲ။ ကျွန်တော် ထူးပြီး ရေးပြစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အကျိုးဆက်အနေနဲ့တော့ မြန်မာပြည်မှာ ငွေအကြွေစေ့ဆိုတာ ပျောက်ကွယ်သွားတော့တာပါပဲ။ တစ်ပြား၊ နှစ်ပြား ဝေးစွ၊ ငါးမူးစေ့၊ တစ်မတ်စေ့သာမက ကျပ် ၅၀၊ ကျပ် ၁၀၀ အကြွေစေ့အထိ ထွက်ဖူးတာ ကျွန်တော်တို့ တစ်နိုင်ငံပဲတောင် ရှိမလား မသိဘူး။ အခုဆို အဲဒီ့ ၅၀၊ ၁၀၀ အစေ့တွေတောင် ပြတိုက်မှာ လိုက်ရှာရမလို ဖြစ်နေပြီ။
အဲဒီ့ ငွေအကြွေစေ့တစ်စေ့ ထွက်လာအောင် သွန်းလုပ်ယူရတဲ့ စရိတ်စကနဲ့ အဲဒီ့ ငွေကြေးတစ်စေ့မှာ ပါနေတဲ့ သတ္တုရဲ့ တန်ဖိုးက အဲဒီ့ အကြွေစေ့ပေါ်မှာ ရေးထွင်းထားတဲ့ တန်ဖိုးထက် မြင့်မားနေတာကိုး။ အလွယ်ပြောရင်ဗျာ၊ ကျပ်တစ်ရာတန် အကြွေစေ့ တစ်စေ့မှာ ပါတဲ့ သတ္တုဖိုးက ကျပ် ၈၀ လောက် ရှိနေပြီး သွန်းလုပ်ရတဲ့ စရိတ်စကက ကျပ် ၄၀ လောက် ကုန်ကျနေရင်ကို တစ်စေ့မှာ ကျပ် ၂၀ အရှုံးပေါ်နေပြီ မဟုတ်ပါလား။
အဲတော့လည်း ငွေအကြွေဆိုတာ သည်ခေတ် မြန်မာပြည်တွင်းက ဘယ်မှ မခွာဖူးတဲ့ လူငယ်များအတွက် ကိုင်ဖူး မြင်ဖူးဖို့ အင်မတန် ခက်ကုန်တော့တာပေါ့။
ငွေစက္ကူကတော့ ဘာပူစရာ လိုသလဲဗျာ။ လိုရင် ထပ်ရိုက်လိုက်ကြတာပေါ့။ စက်ရုံကြီး တစ်ရုံလုံး ရှိနေတာပဲဟာ။ အဲသလိုနဲ့ ကိုနေ၀င်း လက်ထက်မှာ လိုတိုင်း ထပ်ရိုက်လာလိုက်ကြတာများ ၂၅ ကျပ်တန်၊ ၃၅ ကျပ်တန်၊ ၄၅ ကျပ်တန်၊ ၇၅ ကျပ်တန်၊ ကိုးဆယ်တန် အစရှိသဖြင့် အူကြောင်ကျား ငွေစက္ကူတွေ ဗုံးပေါလအော ထွက်လာခဲ့တော့တာပါပဲ။
တစ်ပြည်လုံးကို ဖျက်ချင်တိုင်း ဖျက်၊ သွက်သွက်လည်း ခါရော၊ ငါလုပ်တာ မင်းတို့ မကြိုက်ရင် ငါဖယ်ပေးမယ်၊ မင်းတို့ ဘာသာ ဆက်လုပ်ကြပေတော့ဆိုပြီး ဖုတ်ဖက်ခါ ထွက်ချသွားပါရောလား။ သူ့ဆီက လက်ပြောင်းယူလိုက်ရသူများ ခမျာမလည်း သူလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ လူကောင်းလူတော်မူ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် တော်သူ၊ တန်သူကို နေရာမပေးရေး၊ ဘောင်းတော်ညိတ်၊ စိတ်တော်သိတတ်သူများကိုသာ နေရာပေးရေးမူ အတိုင်း ဆက်လက် လိုက်နာကျင့်သုံးတာကိုပဲ အမှန်မှတ်နေရှာတော့ တိုင်းပြည်ကြီးလည်း ဆီပူအိုးထဲကနေ မီးထဲ ကျ၊ ပြာဖြစ်လု နီးနီး အခြေအနေကို ရောက်နေကြတာပါ။
အဟဲ… ကောင်းတာတစ်ခုက ပြာပုံထဲကနေ ကြွေးကြော်သံ ပေါင်းစုံနဲ့ ဇာတိမာန်တွေ ထက်သန်ပြလိုက်ရင် တစ်ပြည်လုံးက အူကြောင်ကျားနဲ့ ဇာတိမာန်တွေ လိုက်ထက်သန်ရင်း အဲဒီ့ ဇာတိမာန် လေမုန်တိုင်းကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ ပြာတွေတောင် လွင့်စင်ကုန်ပြီး ဖုန်းဆိုးမြေကြီးပဲ ကျန်ရစ်တော့မယ့် အခြေအနေပါ။
ရေးမယ့်သာ ရေးရတယ်၊ တကယ့်တကယ်ကျတော့ ဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင် ပြောသလို၊ ကျွန်တော်ကရော ဘာများ တတ်နိုင်ပါဦးမည်နည်းပဲပေါ့။
ကိုယ်တွေ့ ခေတ်ပျက်ချိန် အစအဦး
အစုတ်ထုပ်ဖက် ပြန်သွားရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တုန်းက စတာလင် ငွေကြေးနယ်ပယ်က ထွက်ခါစ ပထမ ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာမို့ အခုလောက်ကြီး ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် မဖြစ်သေးဘူး။ အကြွေတွေ ဘာတွေ ကိုင်သုံးလို့ ရသေးတယ်။ အိတ်ကပ်ထဲမှာ ငွေတစ်ဆယ်လောက် ရှိရင်ကို တလုပ်စားသောက်ဆိုင် ကောင်းကောင်းမှာ တက်ပြီး ဟင်းသုံးလေးပွဲ လွေးနိုင်ပါသေးတယ်။
အမှန်က ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိလို့။ အပျက်ကို ဦးတည်နေတာ အဲဒီ့ကတည်းကပါ။ ၁၉၇၃-၇၄ လောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နဲ့ တအား ရင်းနှီးနေပြီး မိသားစုဝင်တွေလို ဖြစ်လာကြတဲ့ ကျိုင်းတုံသူ မမများက ဆယ်ပြားစေ့ အလေးစေ့တွေကို ၀ယ်ကြပါတယ်။
ဆယ်ပြားစေ့က နှစ်မျိုး ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခုက ကြေးနဲ့ လုပ်ထားတာ။ လေးတယ်။ ကျောဘက်မှာ (ခေါင်းဘက်) ခြင်္သေ့တံဆိပ်နဲ့။ မျက်နှာစာ (ပန်းဘက်) မှာက ကနုတ်ပန်းနဲ့ ၁၀ါး (ဆယ်ပြား)လို့ ရေးထားတဲ့ စာတန်းနဲ့။
အပေါ့စေ့က ဒန်နဲ့ လုပ်ထားတာ။ ခေါင်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်း၊ ပန်းက ကနုတ်ပန်းပဲ။ ၁၀ ပြားဆိုတဲ့ စာတန်းပါတယ်။ (ကံအားလျော်စွာ အင်တာနက်ထဲမှာ အကြွေစေ့ ပုံတွေ တွေ့လို့ ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
ခေါင်းပန်းလှန်တယ်ဆိုတဲ့ အသုံးတောင် အကြွေစေ့တွေ ကွယ်ပျောက်သွားတာနဲ့ မရှိတော့ဘူး။ အကြွေစေ့ကို ထောင်လိုက် ထောင်ပြီး မွှတ်နေအောင် မွှေ့လိုက်ကာ လက်ဝါးနဲ့ ဗျတ်ဆို ရိုက်ချလိုက်ပြီး ခေါင်းလား၊ ပန်းလားလို့ တစ်ဖက်လူကို မေးပြီး လောင်းကစား လုပ်ကြတဲ့ နည်းပေါ့။
အဲဒီ့ အပေါ့စေ့၊ ဒန်စေ့ကတော့ ဘာမှ အသုံးမ၀င်ဘူး။ ဒါပေမယ့် စခါစတုန်းက အလေးစေ့ ကိုးစေ့၊ ပြားကိုးဆယ်ဆိုရင် ကျိုင်းတုံက မမတွေက တစ်ကျပ်ပေးပြီး ၀ယ်တယ်။ ဆယ်ပြား မြတ်တော့ အဟုတ်မှတ်တာကိုး။ ဆယ်ပြားဆိုတာ နည်းမှတ်လို့လေ။ ကျွန်တော့်အတွက်ဆို ဒူးယားစီးကရက်တစ်လိပ် ၀ယ်လို့ ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆေးပေါ့လိပ်ဆိုရင် သုံးလိပ်လောက် ကောင်းကောင်းရတယ်။ ကျောင်းမှာ ဖျော်ရည်တစ်ခွက် သောက်လို့ရတယ်။ ၀က်သားတုတ်ထိုး တစ်ချောင်းလောက် စားလို့ ရတယ်။ မဆိုးဘူးပေါ့။
အဲဒီ့ကနေ ရှစ်စေ့ (ပြား ၈၀) ကို တစ်ကျပ်ပေးပြီး ၀ယ်လာတော့ ပြားနှစ်ဆယ်ကြီးများတောင် မြတ်လာပါရောလား။ နိပ်သပေါ့။ ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ပြား သုံးဆယ် အမြတ်အထိတောင် ရခဲ့ဖူးတယ် ထင်ပါတယ်။
အမှန်က အဲဒီ့ အကြွေစေ့တွေရဲ့ ကြေးသား တန်ဖိုးတွေက တက်လာတာပါ။ အဲဒီ့ အလေးချိန်လောက်ရှိတဲ့ ကြေးရဲ့ တန်ဖိုးက ဆယ်ပြားမကတော့လို့သာ အဲလို ပေးဝယ်တာပေါ့။ ပြီးတော့ တစ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းမှာ ပြန်ရောင်းတာပေါ့။ ထိုင်းက အလေးချိန်အလိုက် ပြန်ဝယ်ပြီး သူတို့အတွက် အသုံးတည့်တဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ပြန်သုံးမှာပေါ့။
ဒါ့ကြောင့် ထိုင်းကို ရောက်လို့ တစ်ဘတ်၊ ငါးဘတ်၊ ဆယ်ဘတ်စတဲ့ အကြွေစေ့တွေကို ကိုင်သုံးတဲ့အခါ အဲဒီ့ အကြွေစေ့တွေထဲမှာ ကျွန်တော် ရောင်းလိုက်တဲ့ ဆယ်ပြားစေ့တွေက ကြေးသားတွေလည်း ပါနေနိုင်လောက်တာကို တွေးမိပြီး မချိပြုံးလေး ပြုံးမိရပါတယ်။
ဒန်ကျတော့ သူတို့က အဖက်မလုပ်ဘူး။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ဒန်သားက တန်ဖိုး သိပ်မရှိသေးလို့နေမှာပေါ့။
ခေတ်ပျက်ခြင်းရဲ့ အစ၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုရဲ့ အစကို ကျွန်တော်တို့ မသိသားဆိုးရွားစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ပုံကို ပြောလိုရင်းပါ။ ကိုနေ၀င်းရဲ့ ကျေးဇူးပေါင်းစုံကတော့ ရေးလို့တောင် ကုန်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်တဲ့နေရာမှတော့ သူဟာ ဧတဒဂ်ဘွဲ့တောင် ပေးထိုက်သူပဲ ထင်ပါတယ်။
ပြီးတော့မှ သူလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူ့အောက်က လူတွေ အသုံးမကျလို့ ဖြစ်တာလိုလို ပြောပြီး ဆုတ်ခွာ သွားပုံလေးကလည်း သင်းလှတယ်။
တယ်လည်း ဗမာပီသပေတာပဲလို့ ချီးကျူးရမလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ဗမာမှန်ရင် ကိုယ့်အမှားကို ဘယ်တော့မှ ၀န်မခံဘူး၊ မတောင်းပန်ဘူး၊ အထက်စီးကနေ သူတစ်ပါးကိုသာ လက်ညှိုးထိုး၊ အပြစ်ဖို့တတ်ရမယ်လေ။ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ 🙂
သူ့လေ့ကျင့်ပေါက်ဖွားမှုနဲ့ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ သူ့သားမြေးညီနောင်များသည်လည်း အဲဒီ့ ဗမာချိုးပဲ ချိုးနေကြတာပဲ။ ၀န်ခံတယ်၊ တောင်းပန်တယ်ဆိုတာ ဘယ်နားလေးမှာ ကြားဖူးကြလို့တုန်း။ ကျွန်တော်တို့ လွဲသွားပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့ မှားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလေးသာ ပြောကြည့်ကြပါလား၊ ရလိုက်မယ့် လူထု မေတ္တာတွေ။ အခုတော့ ဟုတ်ပေါင်ဗျာ၊ ထစ်ခနဲရှိ ကွန်မြူနစ်၊ ထစ်ခနဲရှိ အကြမ်းဖက်ဆူပူသူ။ လူငယ် ကျောင်းသားဆိုတာ ပခုံးပြောင်းတာဝန် ယူသွားမယ့် ကလျာဏမိတ္တတွေ မဟုတ်ဘူး။ ရန်သူတွေ၊ သူတို့ကို မှောင့်နေ၊ ဒုက္ခပေးနေသူတွေ။ သူတို့ကတော့ အမြဲတစေ ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင်။ တော်တော်လည်း တရားကျဖို့ ကောင်းတဲ့ မောင်တွေဗျ။
အေးလေ… သည်မောင်တွေက ကိုနေ၀င်းရဲ့ လက်ရင်းတပည့်တွေဆိုတော့လည်း အပြစ်မဆိုသာပါဘူးလေ။
၁၉၇၄ မှာ မဆလအစိုးရအဖြစ် တော်လှန်ရေး ကောင်စီက လူဝတ်လဲပြီး ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ကိုနေ၀င်း စိတ်တိုင်းကျ၊ သူ့တပည့်ကျော် ပညာတတ် ရေလိုက်လွဲကြီးတွေနဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအတွက် ပြည်သူ့ဆန္ဒ ခံယူပွဲ လုပ်လိုက်သေးတယ်။
အဲတုန်းက ကျွန်တော်က မဲရုံ လုပ်အားပေးအဖြစ်နဲ့ လုပ်ခဲ့ပုံ မှတ်မိသလောက်ကိုတော့ နောက်တစ်ပိုင်းမှ ရေးပြပါတော့မယ်။
Soe Myat Myo Shweထပ်တစ်ရာ မဟုတ်လားဆရာ
Soe Myat Myo Shwe Or is ထပ်ထစ်ရာ correct ? I just honestly don’t know ပါ
ATK ညည်းမှန်ပါတယ်အေ။ စာလုံးပေါင်း မှားသွားတာ။ ပြင်လိုက်ပြီ။
Khin Myo ဆရာရေ …ဖတ်ပြီးတော့စားချင်တာစာရင်းလုပ်ကြည့်တာ အတော်များသွားတယ်…အဓိက မန်းလေးမှာပဲရတဲ့ အချဉ်ပေါင်း …ရေးရင်း သွားရည်ယိုလာပီ ရှလွတ်
Freddy Lynn နေ၀င်း.ပလာတာ.လက်ဖက်သုတ် အကြွေပေးလို့မရတော့ပါ..လို့များခေါင်းစဉ်တပ်ရမလားမသိ…လဖေ့ရည်သောက်ရင်းဖတ်လိုက်တာ ဗိုက်တာပြည့်သွားဒယ်.. 🙂
Alex Moe လဖက်သုပ် ကို ပုစွန်ခြောက်မပါမစားတတ် ဘူးဆရာရေ. ငယ်ငယ်ကတော့အကြွေတွေသုံးခဲ့ရသေး. ငါးမူးမခေါ်တတ်လို့ နှစ်မတ်ပေးလို့တောင်းတာ. ဘိုးတော်ကြီးမျိုးဆက်တွေကတော့. အဖေကြီးလုပ်တာမှနိတယ်ကြီး ပြောနေတုန်းပဲ
ATK အွင်… ပုစွန်ခြောက်က ခတ္ထနာ လုပ်မထားဘူးလေ။ စားတာပဲလား 🙂 😀 😛
Alex Moe ကြိုက်ထှာကိုး. ဟီးးး တွင်းပိုးလည်းစားကြည့်ဖူးတယ်. ဖျာပုံပုဇွန်ခြောက်လောက်ကြိုက်ဘူး
ATK ငါးကျည်းခြောက်နဲ့ စားလည်း ကောင်းတယ်။ ငါးနှပ်ခြောက် (အာပြဲခြောက်) လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် မီးဖုတ်ကလေးနဲ့ဆိုလည်း လက်ဖက်က ထူးရှယ်ပဲ ခည။
Vol Tin Share ပါရစေ အူးလေး။
Vol Tin ကလေးထဲကလက်ဖက်သုတ်ကြိုက်တာ။ လက်ဆကောင်းတဲ့ အဒေါ်အပျိုကြီးတွေကို ဆံပင်ဖြူနှုတ်ပေး နင်းနှိပ်ပေးနဲ့ သုပ်ကျွေးခိုင်းရတာ။
ပါးပါးလေးပုတ်သွားတဲ့ ပြာတွေတောင်လွင့်တော့မယ် အခြေအနေ၊ ကိုယ်တွေ့ခေတ်ပျက်ချိန်အစအဦး၊ ရွှေလက်ညှိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ၊
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်
နောက်ဆုံး အစုတ်ထုပ်ကို ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က ရေးခဲ့တာပါ။ အခု ပြန်ဆက်မယ်လုပ်တော့ ဘယ်နားက စရမှန်း မသိဘူးတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ အချိန်က တစ်လနဲ့ ဆယ်ရက်တောင် ကြာသွားခဲ့ပြီကိုး။
ဒါနဲ့ အဟောင်း ပြန်ဖတ်တော့မှ ရေးရေးပေါ်လာတယ်။ “ရွှေလက်ညှိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ”ဆိုတာနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
သည်နေရာမှာ စကားစပ်လို့ ပြောလိုက်ဦးမယ်။ ကျွန်တော် “ဗမာ”လို့ သုံးသုံးနေတဲ့ ကိစ္စ။ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေပေမယ့် သည်နေရာမှာ ရှင်းဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
“ဗမာ-မြန်မာ”ပြဿနာက ပညာမဲ့တွေ ထိပ်ရောက်လာသော ပဲခူးရေကြီးတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပညာမဲ့တွေရဲ့ နိုင်ငံရေး အရောင်ဆိုးခံလိုက်ရတဲ့ ဗမာဝေါဟာရပါ။
အတိအကျပြောရင် ဗမာကို မြန်မာလုပ်တာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဗိုလ်စောမောင် လက်ထက်မှာပါ။ ဗိုလ်စောမောင်ကိုသာ သမိုင်းက မရကုပ်ကပ် ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့ကြပေမယ့် သူမွှေခဲ့တဲ့ ဗမာကို မြန်မာပြောင်းတာကိုကျတော့ အခိုင်အမာ ဆက်လက် ကျင့်သုံးနေကြတာလည်း အတော့်ကို ဟာသမြောက်တယ်လို့ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။
အဲဒါကို ပြန်ဆန်းစစ်ရအောင်။ ဗမာစကားရဲ့ အဓိက မူက “ရေးတာ့အမှန် ဖတ်တော့အသံ”ဆိုတဲ့ မူပါပဲ။ ကြက်သီးထတယ်လို့ ရေးပေမယ့် အသံထွက်ရင် ကြက်သိန်းထပါတယ်။ ခြေထောက်လို့ ရေးပေမယ့် ခြီဒေါက်ကမှ အသံထွက်မှန်ပါ။ ဒါလောက်တော့ လက်ခံနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
တစ်ဆင့် ဆက်တက်ရင် ပဲခူးလို့ ရေးပေမယ့် ဗဂိုးလို့ ဖတ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်လို့ ရေးပေမယ့် နေပြီဒေါ်လို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ပြည်မြို့လို့ ရေးပေမယ့် ပြေမြို့လို့ ပြောပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး၊ ရန်ကုန်တောင်မှ ရံဂုံလို့ အသံထွက်ပါတယ်။ မြိတ်ကိုလည်း ဗိတ်လို့ အသံထွက်တာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။
အဲတော့ မြန်မာဆိုတာဟာ အရေးစကားပါ။ အသံထွက်ကျတော့ ဗမာပါပဲ။ ဒါ အရှင်းကြီးပါ။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ အမြင်ရှိသူတစ်ယောက်ကတောင်မှ ကျွန်တော့်ကို လာပြောတာ ရှိသေးတယ်။ မြန်မာဆိုတာ တိုင်းရင်းသား တစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်၊ ဗမာဆိုတာ ဗမာလူမျိုး ကွက်ကွက်ကလေးကိုပဲ ပြောတာ၊ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာလို့ ရေးမှ မှန်မယ်၊ ဘာညာ…
သွားစမ်းပါ။ သမိုင်းသင်တာ မအအောင်လို့ဆိုတဲ့ ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းထွန်းစကားကို ငှားသုံးရရင် သမိုင်းသာ ပြန်ဖတ်ဗျာလို့ ပြောလိုက်ချင်သား။ လွတ်လပ်ရေးခေတ်နဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစမှာ အဲဒါကို ပြောင်းပြန်ပြောခဲ့တာ။ မြန်မာဆိုတာ မြန်မာလူမျိုး ကွက်ကွက်ကလေးကို ပြောတာ၊ ဗမာဆိုတာကမှ တိုင်းရင်းသားတစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆက လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကာလနဲ့ လွတ်လပ်ရေးပြီးစ ဗိုလ်နေ၀င်းမတိုင်ခင် ခေတ်တစ်ခေတ်မှာ ပြောခဲ့ပြန်တယ်။
ဒါဆို ဘယ်ဟာ အမှန်လဲ။ တုတ်ထမ်း ငြင်းနေကြမှာလား။ အဲဒါက အဲလောက် အရေးကြီးလို့လား။
ပြောရတာတော့ မကောင်းဘူးဗျ။ မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ်၊ စာဖွဲ့၊ ဇာချဲ့ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရွှေဗမာတွေဟာ အထုံဝါသနာ တယ်ကြီးကြပေတာပဲ။
ဗမာမှန်တယ်၊ မြန်မာမှ မှန်တယ်ကိစ္စကို တစ်အိတ်လုပ်နေကြမယ့်အစား တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲဆိုတာ မစဉ်းစားဘူး။ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာ ၆၇ နှစ်ကျော်လို့ ၆၈ နှစ်ထဲ ချင်းနင်း ၀င်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူ ပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပျက်ပြားမှုကြီးကဖြင့် ခုထက်ထိ အတောကို မသတ်နိုင်သေးဘူး။
တိုင်းရင်းသားတွေက ဖှက်ဒရယ်မူကို ကိုင်စွဲထားတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်မှာ တစ်ချိန်လုံး ရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ အမြင်က ဖှက်ဒရယ်ဆိုတာ ခွဲထွက်ရေး၊ တိုင်းပြည်ပြိုကွဲရေး လမ်းစပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ပေါင်းစပ်စုစည်းရေး သဘောကို သူတို့ကို ဘယ်သူကမှ လမ်းမပြခဲ့ဘဲ တကယ့်အန္တရာယ်ကြီးလို သွန်သင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ ကျေးဇူးတော်တွေပဲ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ အမြင်ဟာ မှားသလားဆိုတော့လည်း မမှားပါဘူး။ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။ အပြည့်မမှန်တာ တစ်ခုပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး မရှိရင် ဖှက်ဒရယ်ဟာ ခွဲထွက်ရေး ဘက်ကို ယိုင်သွားမှာပါ။ သူတစ်လူ ငါတစ်မင်းတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပါ။ အရှေ့ဥရောပက ဖြစ်ရပ်တွေက ဒါကို သက်သေခံနေပါတယ်။
ဒါပေသည့် တစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့က အဲသလို ပြည်ထောင်စုတွေ အစိတ်စိတ် အမြွာမြွာပြိုကွဲသွားတာကို အားမပေးကြဘူး။ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမှာ သက်ရောက်မှုတွေ သိပ်များလို့ အားမပေးကြတာ။
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေပဲ။ (သည်နေရာမှာလည်း “အုပ်ချုပ်ပုံ” တစ်လုံး တမင်ထည့်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဆိုတာ နောက်ပိုင်းမှာ ရှင်းပါ့မယ်။) အဲဒီ့ ၂၀၀၈ “ဖွဲ့အုပ်ဥ”မှာ ဖှက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို တစ်လုံးမှ သုံးပင် သုံးမထားပေမယ့် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံဟာ ဖှက်ဒရယ် အတော်ဆန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံ မှန်ပင် မှန်နေငြားသော်လည်း အာဏာခွဲဝေမှုပိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး အာဏာကိစ္စမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ယိုယွင်းပျက်စီးနေတာ လူတိုင်းအသိပါ။ အဲဒါကို အချိန်မီ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရမှာပါ။ တရားဥပဒေရှေ့မှောက်မှာ အားလုံး အညီအမျှသာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေ မကျေနပ်စရာ ဘာအကြောင်းမှ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဓိက လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို နားလည်တတ်ကျွမ်းသူ ပြည်ပ ပညာရှင်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သေချာ ပြင်ဆင် ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ၊ ပြတ်ပြတ်သားသား အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်ဆိုရင် လာမယ့် နှစ် ၂၀ မှာ ဗမာပြည်ပဲခေါ်ခေါ်၊ မြန်မာပြည်ပဲခေါ်ခေါ်၊ လူ့ဘုံတိုင်းပြည်ပဲခေါ်ခေါ်၊ ခေါ်ချင်တာခေါ်၊ တိုင်းရင်းသား အားလုံး ကျေကျေလည်လည် စုစုစည်းစည်းနဲ့ အားလုံး စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်သွားမှာလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ဗမာ၊ မြန်မာဆိုတဲ့ ပညတ်တွေက အရေးမကြီးပါဘူး။ အဲဒါကို တုတ်ထမ်းငြင်းနေကြမယ့်အစား အနှစ်သာရရှိတဲ့၊ တကယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေက ပိုအရေးကြီးကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြချင်တာပါဗျာ။
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ
ဗမာမင်းများ အုပ်ချုပ်ပုံ စာတမ်းဆိုလား (အိမ်မှာ ရှိတယ်၊ ဘယ်နားမှာ ထားမိမှန်း မသိတော့ဘူး။ ထရှာရမှာ ပျင်းလို့ ရမ်းရေးလိုက်သဗျ။ အမှန်သိတဲ့သူတွေ ပြင်ပေးကြပါ) ရှိဖူးတယ်။ Constitution နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗမာမှာ အဲဒါ အနီးစပ်ဆုံးပဲ။
အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ခန်းစထစ်ကျုရှင်း(န်)ပေါ့။ အဲဒါကို အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ Cambridge Advanced Learner’s အဘိဓာန်မှာ အောက်ပါအတိုင်း အနက်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။
(a written document which forms) the set of political principles by whichastate or organization is governed, especially in relation to the rights of the people it governs
Merriam-Webster အဘိဓာန်မှာတော့… the system of beliefs and laws by whichacountry, state, or organization is governed; :adocument that describes this system လို့ ဆိုထားတယ်။
Macmillan အဘိဓာန်မှာလည်းaset of basic laws or principles foracountry that describe the rights and duties of its citizensand the way in which it is governed လို့ ဖော်ပြထားပြန်တယ်။
Oxford အဘိဓာန်ကျတော့ A body of fundamental principles or established precedents according to whichastate or other organization is acknowledged to be governed လို့ ဆိုပြန်တယ်။
အဲဒီ့ အဘိဓာန်တွေအားလုံးရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ထဲမှာ တညီတညွတ်တည်း ပါနေတာက govern ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရပဲ။ ဒါ့ကြောင့် “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ”လို့ “အုပ်ချုပ်ပုံ”ကို ချန်လှပ်ပြီး ပြောရင် ခန်းစထစ်ကျုရှင်း(န်)ရဲ့ အနက်က မပြည့်စုံဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါ “ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ”လို့ ရေးတာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် “ဖွဲ့အုပ်ဥ”ကိုလည်း မြန်မာလို “ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ”လို့ပဲ သုံးစွဲခဲ့တာပါ။
“အုပ်ချုပ်ပုံ”ရယ်လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်၊ စနစ်တကျ၊ စည်းကမ်းရှိရှိ လုပ်ချင်ပုံမရတဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်း လက်ထက်ကျတော့မှပဲ ခန်းစထစ်ကျုရှင်း(န်)ရဲ့ မြန်မာဘာသာပြန်ခမျာ “အုပ်ချုပ်ပုံ”ဆိုတဲ့ မရှိမဖြစ် ဝေါဟာရ တစ်လုံး ချန်လှပ်ပြီး “ဖွဲ့စည်းအုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ”ရယ်လို့ ဖြစ်လာတော့တာပါ။
ဗမာပြည်ကြီးအတွက် ဇမ္ဗူဒီပါလက်ျာတောင်တောင်ကျွန်း သြဘာနိမိတ်ထွန်းတော့တာပေါ့။ “အုပ်ချုပ်ပုံ”ဆိုတဲ့ “ပုံစံ” “စနစ်”ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး၊ အာဏာရှင်က ထင်တိုင်း ရမ်းကားတော့မယ့် နိမိတ်ဆိုတာ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ ဘယ်သူမှ မရိပ်စားမိခဲ့ပါဘူး။
ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံကြသူများကျပြန်တော့လည်း ဗိုလ်နေ၀င်းလုပ်ခဲတဲ့ အလုပ်၊ သုံးခဲ့တဲ့ စကားတွေမှ ဘုရားကျင့်၊ ဘုရားဟောမှတ်ပြီး ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေကြပါတော့တယ်။ ဗိုလ်အောင်ဆန်းနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ ခေတ်ကာလဟာ ဘာမှ ပြန်ကိုးကားစရာကို မဟုတ်တော့ဘူး။ အဲဒါတွေ အကုန် အလွဲချည်းပဲလို့ ဗိုလ်နေ၀င်း ရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းသာ မှတ်ထင်နေကြပါတော့တယ်။ သည်လိုနဲ့ ၂၀၀၈ “ဖွဲ့အုပ်ဥ”အတွက် ဗမာ ဘာသာပြန် ဝေါဟာရမှာလည်း “အုပ်ချုပ်ပုံ”က ပါမလာတော့ဘူး။
မှတ်မိသမျှ ပထမဆုံး ဆန္ဒခံယူပွဲ
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်တွေတုန်းကတော့ ကျွန်တော်လည်း ဒါတွေ ဘာသိဦးမှာလဲဗျာ။ ဆယ်တန်းပဲရှိသေးတား။ အဲဒီ့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ”မဟာအတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်တော့ ကျွန်တော်မှ ၁၆ နှစ် ပြည့်ပြီးစ ရှိသေးတယ်။ ပြည့်ပြီးစဆိုတာတောင် အတိအကျ ပြောရင် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီးတာ တစ်လမပြည့်သေးချိန်မှာ ၇၃ ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပါတာပါ။
အဲဒီ့ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ကျွန်တော်က မဲရုံလုပ်အားပေးပေါ့။ အမှန်တော့ မဲရုံမှာ လက်တို လက်တောင်း လုပ်ပေးရတဲ့ တောက်တိုမည်ရပါ။ ကျွန်တော်ကလည်း အိမ်ထဲ မနေရပြီးရော၊ သွားလုပ်တာပေါ့။
မဲပေးတဲ့သူတွေ လာကြ၊ ကန့်လန့်ကာ ကာထားတဲ့ အခန်းလေးထဲ ၀င်သွားကြ၊ ကျွန်တော်တုိ့တွေက ဟိုနား ယောင်ပေယောင်ပေ၊ သည်နား မိုးတိုးမတ်တတ်။
မှတ်မိတာကတော့ အဲဒီ့မဲပုံးတွေ ထမ်းပြီး ရန်ကုန်ဗဟိုစာတိုက်ကြီးကို သွားရတာပဲ။ အဲတုန်းက ကျွန်တော်တို့က လမ်း ၄၀ မှာ နေနေတာ။ စပါ့(ခ်)(စ်)လမ်းနဲ့ ကမ်းနားထောင့်က စာတိုက်ကြီးဆိုတာ ဘာမှ မဝေးဘူး။ သည်တိုင်း ခြေလျင် ထမ်းသွားရတာပေါ့။
ဟိုရောက်တော့ မဲပုံးထဲက မဲတွေ သွန်ချ၊ အဖြူပုံးထဲဟာတွေက တစ်ပုံ၊ အမည်းပုံးထဲက ဟာတွေက တစ်ပုံ၊ သတ်သတ်စီ ခွဲထည့်တာပေါ့။ သိတယ်။ အမေနဲ့ အဖေကတော့ ကန့်ကွက်မဲပဲ။ သို့ပေတည့် သွန်လိုက်ကတည်းက မြင်သာနေတာက အဖြူပုံးထဲက ထွက်တဲ့ မဲက ပိုများတယ်။ အမည်းပုံးထဲမှာက သိပ်မများလှဘူး။
ဇာတ်ပေါင်းတော့ အဲဒီ့ အုပ်ချုပ်ပုံစနစ် ပရမ်းပတာနဲ့ ခန်းစထစ်ကျုရှင်း(န်)မဟာဟာ လူထု ထောက်ခံမှု ၉၄.၄၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အတည်ဖြစ်သွားပါရောလား။ ရာခိုင်နှုန်းကိစ္စကတော့ သံသယနည်းနည်း ရှိချင်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့် မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်လိုက်ရတဲ့ အပုံကြီးတွေနဲ့ဆိုရင် ၉၅ အချိုး ၅ တော့ မကဘူးဗျ။ သွန်လိုက်ကတည်းက မြင်ရတဲ့ အမြင်အရ ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မဲရုံမှာကို မရှိဘူးဆို ၇၀ အချိုး ၃၀ လောက်တော့ ရှိတာလည်း အမှန်ပဲ။
မဲတွေ ရေတော့လည်း ကျွန်တော်ပါ ၀င်ရေခဲ့ပါတယ်။ ကန့်ကွက်မဲက ဘယ်လောက်၊ ထောက်ခံမဲက ဘယ်လောက်ပေါ့ဗျာ။ မဲရုံမှူးတွေက အဲဒီ့ဂဏန်းတွေကို သူတို့ပုံစံမှာ ဖြည့်ကြရတာပ။ နှစ်တွေလည်း မနည်းမနော ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အပြင် အာရုံကလည်း အဲဒီ့ကတည်းက မရှိခဲ့တော့ ကိန်းဂဏန်းတွေလည်း မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ၉၀ ရာခိုင်းနှုန်းတောင် ထောက်ခံတယ်ဆိုတာကတော့ ဟုတ်ကို မဟုတ်တာလည်း အမှန်ပဲ။ အနည်းဆုံး ကျွန်တော်တို့ မဲရုံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြို့နယ်မှာပေါ့။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ သိတယ် မဟုတ်လား၊ ကိုယ့်ဖဲကိုယ်ချိုး၊ ကိုယ်လက်နဲ့ ကိုယ်ဝေတဲ့အပြင် သတင်းမီဒီယာ အားလုံးကလည်း ကိုယ်ပဲ ကိုင်ထားတာဆိုတေ့ာ အားလုံးဟာ ဖြစ်စေသတည်းပေါ့။
အဲဒီ့ကာလတွေက ရိုးစင်းလွန်းပါတယ်။ တံခါးပိတ်ဝါဒ စတင်နေပြီမို့ အစစအရာရာက ပါးရှား ပြတ်လပ်တယ်။
ကိုယ်တိုက် ဆပ်ပြာဆိုရင် ကာဘော်လစ် (Carbolic) ဆပ်ပြာကို သုံးရတာဗျ။ သွားတိုက်ဆိုးရင်လည်း ပက်ဆိုးဒင့်လို့ လူတကာ ခေါ်တဲ့ ပြည်တွင်းဖြစ် Pepsodent ပဲ။ ဒါတောင်မှ တော်လှန်ရေး ကောင်စီခေတ်မှာ ပြည်သူ့ဆိုင်လို့ ခေါ်ပြီး ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ သမ၀ါယမဆိုင်လို့ ပြောင်းခေါ်တဲ့ အစိုးရဆိုင်တွေက ခွဲတမ်းနဲ့ ၀ယ်ရတာ။ မှောင်ခိုမှာတော့ လိုသလောက် ၀ယ်လို့ ရသပေါ့။
အဲဒီ့မတိုင်ခင် ကျွန်တော် မမီလိုက်တဲ့ အဲဒီ့ရှေ့နားလေး အချိန်တစ်ချိန်မှာ ဘီအီးဒီစီ ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။ ဗမာ့စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းပေါ့။ အဲဒါက စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားနဲ့လို့ သံကုန်ဟစ်ခဲ့လေသူ ဗိုလ်အောင်ကြီး လက်ရာလို့ ကြားဖူးပါတယ်။ သူကလည်း မခေပုံများ ဘီအီးဒီစီသာ မရှိတော့တယ်၊ အရက်ဖြူကို ဘီအီးလို့ ခေါ်တဲ့အထိ စွဲကျန်ရစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ ကော်ပိုရေးရှင်းက ထုတ်တဲ့ အရက်ဖြူ၊ အစိုးရဆိုင်မှာ ခွဲတမ်းနဲ့ ၀ယ်ရတဲ့ အရက်ဖြူကို ဘီအီးလို့ ခေါ်ခဲ့ပေတာကိုး။
သမဆိုင်ခေတ်မှာတော့ ကျွန်တော်လည်း အိမ်က ခိုင်းရင် သမဆိုင်ကို သွားရတယ်။ ဘာမှ လွမ်းစရာ မရှိပါဘူး။ ဗလာကျင်းနေတဲ့ မှန်ဘီရိုတွေ။ ခုခေတ် ၀င်းသူဇာဆိုင်က မှန်ဘီရိုတွေကမှ ပစ္စည်းလေး၊ ဘာလေး မြင်ရသေးတယ်။ အဲဒီ့ခေတ် သမဆိုင်က မှန်ဘီရိုတွေက ဟောင်းလောင်း။ ဆိုင်ထိုင် စာရေးတွေ၊ စာရေးမတွေကလည်း မျက်ခွက်တွေက အစ အချိုးမပြေ။
ဆန်လည်း အဲဒီ့ကပဲ ၀ယ်ခဲ့ရ မှတ်တယ်။ တော်တော် ချို့ငဲ့ခဲ့တာပေါ့။
ဆန်ဆိုလို့ လောပိတမှာ နေတုန်းက ဆန်ရှားတာကို ပြေးသတိရမိသေးတယ်။ တစ်ဘ၀လုံးမှာ အဲဒီ့ တစ်ခါပဲ စားဖူးတဲ့ ဆန်လုံးညိုတွေ စားခဲ့ဖူးတာကိုပါ။ ဒါပေမယ့် အဲတုန်းက ကလေးလည်း ကလေး၊ အမေကလည်း ထမင်းပူပူ၊ ဟင်းပူပူပဲ ကျွေးတာမို့ တောင်ယာဆန်၊ ဆန်လုံးညိုတွေက ကျွန်တော့်အတွက် စားလို့ ကောင်းတဲ့ ထမင်းပါပဲ။
ဆန်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေ စားစေချင်လို့ နယ်ကနေ ဆန်လေး လေး-ငါးပြီလောက် သယ်လာပေးတဲ့ မိခင်၊ ဘခင်တွေ ထောင်ကျကုန်တာလည်း အဲဒီ့ခေတ်ပဲပေါ့ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် စိတ်ပျက်တာက ကာဘော်လစ် ဆပ်ပြာပဲ။ အနံ့ကြီးက ဆေးရုံနန့်ကြီး ရသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါပဲ တိုက်စရာရှိတော့ ဒါနဲ့ပဲ တိုက်ပေါ့။
ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာအကြောင်း မန္တလေးက ကြီးကြီးမေတောင် သွားသတိရသေးတယ်။ သူတို့အကြောင်း ပြောတုန်းက ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ သူတို့က တိုက်တန်းလျားလေးတစ်ခုမှာ နေကြတဲ့အကြောင်း။ အဲဒီ့ တိုက်တန်းလျား ဆိုတာက ဆယ်ပေ၊ ဆယ့်ငါးပေလောက်ရှိတဲ့ အခန်းလေးတွေကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တန်းစီပြီး အလယ်မှာ လူသွားလမ်း ရှစ်ပေလောက် ထားထားတာ။ တိုက်မျက်နှာစာ အနောက်ဘက်ကို သူတို့က အိပ်ခန်း လုပ်ထားတယ်။ အရှေ့ဘက်၊ တိုက်နောက်ဖေးဘက်အခန်းတွေကျတော့ မီးဖိုချောင်ပေါ့။ ထမင်းစားခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်းကတော့ အလယ်က လူသွားလမ်းပေါ့။
အဲဒါ တစ်ရက်မှာ မန်ကျည်းရွက်ချဉ်ရေ ချက်ပါရောလား။ ချဉ်ရေအိုး ဘေးမလှမ်းမကမ်းမှာက သုံးလက်စ ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာ နီနီရဲရဲ ပျော့ပျော့ပြဲပြဲလေးက ရှိနေတယ်။ သိပ်တော့ အတုံးမကြီးတော့ဘူးပေါ့။ ကြီးကြီးမေကလည်း အဲဒီ့အချိန်မှာ ငါးဆယ်ကို ကောင်းကောင်းကျော်ပြီဆိုတော့ မျက်လုံးကလည်း သိပ်မကောင်းတော့ဘူး။ သူ့မျက်လုံးထဲမယ် အဲဒါကို ကာဘော်လစ်လို့ မထင်ဘူး။ ခရမ်းချဉ်သီးလို့ ထင်လိုက်တာ။ သူ့ညီမတွေကတော့ နမော်နမဲ့နဲ့ ချဉ်ရည်ထဲ ထည့်မယ့် ခရမ်းချဉ်သီးကို ထည့်မသွားဘူးလို့ တွေးပြီး ဇိုးဇတ်နဲ့ အဲဒီ့ အတုံးလေး ချဉ်ရည်အိုးထဲ ပစ်ထည့်လိုက်ပါသတဲ့။
ညစာလည်း စားကြရော တစ်အိမ်လုံးက သည်မန်ကျည်းရွက်ချဉ်ရည်ကလည်း ဘာဖြစ်တယ် မသိဘူး၊ ကာဘော်လစ်စော် နံလိုက်တာလို့ ပြောကြပါသတဲ့။ ကြီးကြီးမေကလည်း သူ့ဝိုင်းဆူမှာစိုးလို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အသာနေလိုက်ပါတယ်။ နောက်ကျတော့မှ သူပဲ အားလုံးကို ပြန်ဖွင့်ပြောပြတာပါ။ အဲတော့လည်း ရယ်ရယ်မောမောပေါ့။
ဖြစ်ရပ်တွေဟာ အဲလိုပါပဲ။ ဖြစ်နေတုန်း ခဏမှာတော့ စိတ်တိုချင်စရာပေမယ့် ကြာလာတော့လည်း ရယ်မောလို့ ရသွားတာပေါ့လေ။
အဲဒီ့ခေတ်မှာ ပါးရှားတာ နောက်တစ်မျိုးက ရေမွှေးပဲ။ အစိုးရ ထုတ်တဲ့ မဉ္ဇူရေမွှေးပဲ ရှိတယ်။
တစ်ရက်က စာအုပ်မျက်နှာစာမယ် ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ စာတိုတစ်ပုဒ်အောက်မှာ တစ်ယောက်က လာမေးသွားတယ်။ ပြန်တောင် မဖြေရသေးဘူး။
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ရှင်းပြပေးပါတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့… အစစ အစိုးရက ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ ချုပ်ကိုင်ထား၊ ယမ်းမီးခြစ်မှသည် မော်တော်ကားအထိ ရှိရှိသမျှ လုပ်ငန်းကိုလည်း အစိုးရကပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်၊ နိုင်နင်းသလားဆိုတော့ မနိုင်နင်း၊ အလုပ်ဖြစ်သလားဆိုတော့ မဖြစ်၊ လူထုမှာတော့ စံမမီ အရည်အသွေး ညံ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေ သုံးနေကြရတဲ့ ခေတ်ကို ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ဟု ခေါ်သည်ဟု ဖြေရမယ် ထင်ပါတယ်။
တခြားဟာ မပြောနဲ့၊ ယမ်းမီးခြစ်တောင် အပေါက်တည့်အောင် မထုတ်နိုင်တာ အဲဒီ့ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ပါဗျား။ အဲဒီ့မတိုင်ခင်က နတ်သမီး မီးခြစ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ဥတုသုံးပါး ခံသည်လို့ ရေးထားတယ်။ တကယ်လည်း နွေနွေ မိုးမိုး ဆောင်းဆောင်း အဲဒီ့ မီးခြစ်ဆံတွေက တစ်ချောင်းခြစ် တစ်ခြောင်းတောက်ပဲ။
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကျတော့ အဲဒီ့ မီးခြစ်စက်ရုံလည်း ပြည်သူပိုင် သိမ်းခံရတဲ့အထဲ ပါသွားတယ်။ ဥတုသုံးပါးတော့ ခံမြဲပါပဲ။ ခံပုံသာ မတူတော့တာ။ နွေနွေ မိုးမိုး ဆောင်းဆောင်း အဲဒီ့ထဲက မီးခြစ်ဆံတွေက မှိုတက်နေတယ်။ ယမ်းကလည်း အခြောင်းတိုင်း ပါချင်မှ ပါတာ။ တစ်ခါတလေ ဘူးထဲက မီးခြစ်ဆံ၊ ကံမကောင်းရင် တစ်ဘူးလုံး ကုန်မှ တစ်ခြောင်းလောက် ထတောက်တာမျိုး။ ဒါလည်း ခြစ်တတ်ဦးမှ။ အဲဒါ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး နိမိတ်ပုံပဲခင်ဗျ။
အမယ်… အထင်တော့ မသေးနဲ့။ အခုထက်ထိတောင် အဲဒီ့မီးခြစ်တွေ ထွက်နေသေးတယ်။ တစ်လောက နေပြည်တော်က ဟိုတယ်တစ်လုံးကို ရောက်တော့ အဲဒီ့ဟိုတယ် အိပ်ခန်းထဲမှာ ချပေးထားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အစဉ်အလာ မပျက် ယူခြစ်ကြည့်တယ်။ အဲဒီ့ နိုင်ငံတော် မီးခြစ်ကလည်း အစဉ်အလာ မပျက် မှိုတက်မြဲ၊ အစဉ်အလာမပျက် အချောင်း အစိတ်လောက်မှ တစ်ချောင်းတောက်မြဲ။
အဲဒါကို ခုထိ ဆက်ထုတ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တုိ့ တိုင်းပြည် ခုထိ ဆင်းရဲနေတာလည်း ပြောစရာကို မလိုတော့ပါဘူးဗျာ။
အဲ… အဲဒီ့ဟိုတယ်ကလည်း နှယ်နှယ်တော့ မဟုတ်ဘူးနော။ ခယ်(မ်)ဖင်းစခီးတို့၊ ဟစ်(လ်)ထန်တို့၊ ဖာ့(ခ်) ရွိုင်ယယ်(လ်)တို့၊ လိပ်(ခ်)ဂါးဒင်းတို့လို နိုင်ငံတကာ ဟိုတယ်ကြီးတွေ နေပြည်တော်မှာ ပေါ်မလာခင်တုန်းက နေပြည်တော်က အကောင်းဆုံးဟိုတယ်တွေထဲမှာ ပါတဲ့ ဟိုတယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေသည့် ချပေးထားတာကတော့ အဲဒီ့ ယမ်းမီးခြစ်ဘူး။
Ei Yupar Winဖတ်ပြီး။ အဘွားပြောတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်၊ အသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ စက်ရုံတွေ၊ လမ်းထိပ်က သမဝါယမနဲ့ အုန်းပင်မီးခြစ်ကို သတိရ။ ဗမာနဲ့ မြန်မာသဘောမှာ အခုခေတ်သုံးတဲ့ မြန်မာကိုပဲ လက်ခံလိုက်မိပြီဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိ။ အများညီတော့ ကျွဲဖြစ်သွားသလိုပေါ့။
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ သမိုင်းကို ပြန်နွှေးဖြစ်။ ဒါပေမယ့် မဆွေးနွေးအားသေး။ နောင်မှ သမိုင်းထပ်ရှာဖတ်ရန်တေးထား။ အခုတော့ သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြားနဲ့ ရောင့်ရဲနေ။ ^,^ အချိန်မရှိတာလည်းပါ။
Yuri Gallerကျွန်တော် ကတော့ မျက်နာသစ်ဖို့ ကာဘောလစ်ကို အကြိုက်ဆုံး ။ မရှိတော့မှ အခြားဆပ်ပြာသုံးတယ်။
ATKအနမ်းမခံချင်တဲ့ သဘောပေါ့ညော် 🙂
Alex Moeနတ်သမီးမီးခြစ် အနီလေးတွေ ငယ်ငယ်တုန်းကအမှတ်တရ. နောက်ပိုင်း ဆင်တံဆိပ် မီးခြစ် တရုတ်ကသွင်းတာလားမသိ. ဂက်စ်မီးခြစ်ကတော့ ဟုန်ပန်း က စက်ရုံထောင်ထုတ်တော့မှ သေချာကိုင်ဖူးတယ်မှတ်တာပဲ
ATKအွင်… နတ်သမီးမီးခြစ် မီလိုက်တယ်ဆို ဘာဘူ Moe အသက် မငယ်တော့ဘူးပဲ။ အနည်းဆုံး ၄၅။ သည်အချိန်အထိ မိန်းမမယူသေးတာ ချီးကျူးသဗျာ 😀
Alex Moeငင်. အဲ့လောက်မရှိသေးပါဘူး ဆြာရယ်. ငယ့်ငယ်လေးတုန်းကပါဆို.
ATKဆောတီး… နှစ်နှစ် သုံးနှစ် ပိုလိုက်မိတွားဒယ် 🙂
Alex Moeရနိကုန်လာရင် ဆြာကြိုက်တာလေးဝယ်ခဲ့မယ်
ATKအွင်… အဲဒါ ရန်ကုန်က ထုတ်တာလေ။ ဆိတ်သားခြောက်၊ အမဲခြောက်ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်။ 🙂
Alex Moeဟုတ်လား. မန်းလေးကထုတ်တာမှတ်နေတာ. ဒါဆိုလည်း. ဆိတ်သားခြောက်ပေါ့ဆြာရယ်. ယူလာခဲ့မယ်
ATKမျှော်လင့်လျက်ပါ မြသီတာ 😀
Maung Thuraအူတူတူနဲ့သုံးပတ်ခံနတ်သမီး မီးခြစ်ကိုမေမြို့ခေါ်ပြင်ဦးလွင်က ဆောင်းသဇင်မှာလည်းပေးတယ်အကိုရ
Shwe Gyiဟုတ်တယ်ဗျ၊၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့်အမေလည်း အဲ့ လိုပြောဖူးတယ်၊၊ (အနာပျောက်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးလိုမျိုးပါတယ်ဆိုလား)၊၊ဒါကိုပဲ တမင်တိုက်စေချင်လို့ ပဲလာ၊၊ သူလည်းတဆင့်စကား တဆင့်ကားတာလား၊၊ တကယ်လားတော့ ခုထိမသိသေးဘူး၊၊
ATKCarbolic ဆိုတာ cabolic acid နဲ့ ထုတ်ထားတာမို့ germicide ထဲမှာ ပါပါတယ်။ ပိုးသတ်ပေါ့ဗျာ။ သို့သော် virus တော့ သတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ သတိပေးတာ။ ခများက လူပျိုဂျီးဆိုတော့ ပိုးသတ်တယ်ဆိုပြီး ထင်ရာ လျှောက်လုပ်ရင် အကျိုးနည်းကုန်မစိုးလို့(စ်) 😛
Shwe Gyiကတောက်… အဲ့ချက်တော့ နာထှာဘဲ၊၊ ဂုတော့ မျှော်လင့်ထားသမျှတွေ သဲထဲ သေးပေါက် သလိုဖစ်ကုန်ဘီဘော့ ဆြာရယ် 😛
‘Song Thiri’ခုမှ ဖတ်လို့ ပီးသွားကြောင်းနဲ့ ချာက ဆယ်တန်းကျောင်းသားဖစ်နေချိန်မှာ သာမီးကတော့ ဘယ်ငရဲဘုံမှာ ရှိနေသေးသတုန်း မသိ 😀
သို့ပေမယ့် ချာပြောတဲ့ ခေတ်ကိုတော့ အဖွားတို့ အမေတို့ ပြောလို့တော့ နားရည်ဝနေတာ ချာပြောတာတွေ မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်လာမိတယ်။ အဖိုးတို့ အဖွားတို့လက်ထက်က ပြည်သူပိုင် သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းတွေရောပေါ့ 😀
K Yamone Aungအိမ်ထောင်စု စာအုပ်နဲ့ ဆန်ထုတ် (ဝယ်)ရတယ် လူဦးရေနဲ့ အချိုးကျ ပေးတယ် တစ်ယောက် တစ်လ ၄ ပြည် ထင်တာဘဲ
Sandar Tinတခေတ်ကကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးတာ အမှတ်ရမိပါတယ်ဆရာ။
Thor Zinကျေးဇူးပဲဆရာ၊ ဖတ်ရတာ အတော်တန်ဖိုးရှိပါဘိ။
၂၀၁၅ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ ဖျစ်ဖျစ်မြည်အောင် ကောင်းခဲ့တာ
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ အရည်အသွေးကောင်းတာ တစ်ခုကို မမေ့မလျော့ ထည့်မှ တရားမှာပေါ့။ အဲဒါကတော့ မန္တလေး အရက်ချက်စက်ရုံက ထုတ်တဲ့ အရက်တွေနဲ့ စောစောက ပြောတဲ့ ဘီအီး(ဒီစီ)အရက်ဖြူတို့ရဲ့ အရည်အသွေးကတော့ ထိပ်တန်းခင်ဗျ။ အဲဒါတော့ တကယ်ကို ကောင်းခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော်နဲ့ အရက်နဲ့က ဘယ်လို ရေစက်လဲတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော့်အဖေက အရက်မသောက်ဘူး။ ဦးကြီးကိုကိုကတော့ သောက်တယ်။ ဒါပေသည့် သူသောက်တယ်ဆိုတာလည်း နေ့နေ့ညည သောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ နာမည်ပျက်ကတော့ တကယ်ရှိအောင် သောက်တာ။ သူသောက်တာက ဆယ်ခါ့ရံ တစ်ခါ ဖြစ်လောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သောက်ပြီဆိုရင် အကွဲသောက်တော့တာပဲ။ ပြီးတော့ လူမှန်း သူမှန်း မသိ။ ကျွန်တော့် ရှင်ပြုတုန်းက ငှားထားတဲ့ ကား တက်မောင်းလို့ တိုက်လာတာမျိုးအထိ ဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် အိပ်ရာပေါ် လဲပါရောလား။ လဲပြှီဆိုရင် မသောက်တော့ပြန်ဘူး။ တမေ့တဆွေး နေပြန်ရော။ ပြန်သောက်ရင် အဲလိုပဲ ပြန်ဖြစ်ပေါ့။
အဲတော့ ဦးကြီးကိုကို အရက်သောက်ပုံက ကျွန်တော့်အတွက် အားကျစရာ၊ အတုခိုးစရာတော့ မဟုတ်တာ အမှန်ပဲ။ စိတ်ပျက်စရာကြီးရယ်။
ကျွန်တော် ကလေးဘ၀တုန်းက မန္တလေးမှာ ထန်းရည်တစ်ခါ မူးဖူးတယ်လို့တော့ ပြောကြတာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ မှတ်ကို မမှတ်မိတော့ဘူး။
ကျွန်တော် ဖတ်တဲ့ ၀တ္ထုတွေ၊ ကြည့်တဲ့ ဓာတ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ ဇာတ်လိုက်တွေ သောက်ကြတယ်။ ကျွန်တော် အရူးအမူး စွဲလန်းတဲ့ ၀င်းဦးကလည်း အရက်သောက်တဲ့အပြင် သူ့ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း သူက သောက်ပြတယ်။ ဆရာသော်တာဆွေဆိုလည်း အရက်အကြောင်း တယ်ရေးပဲ။ အဲဒါတွေကြောင့်လားတော့ မသိဘူး၊ ကျွန်တော့် မသိစိတ် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ အရက်က ရှိနေတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆယ်တန်းပထမနှစ်ရောက်တဲ့အထိ အရက် မသောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ… တစ်ခါတော့ သောက်မိတယ် ထင်တယ်။ အဲဒါ အဖေသိသွားတော့ ဘယ်နေမလဲဗျာ။ ဆော်ပလော်တီးတာပေါ့။ ဒါလည်း ကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ဘူး။
ဆယ်တန်း ဒုတိယနှစ် တစ်နှစ်လုံးလည်း မသောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီ့နှစ် ဆယ်တန်းဖြေပြီး အိမ်ပေါ်က ဆင်းနေရချိန်မှာ မှတ်မှတ်ရရ ဘီယာတစ်လုံး ၀ယ်သောက်ဖူးတယ်။ မသောက်ဖူးလို့ မြည်းကြည့်တာ။ နိုင်ငံခြားဖြစ် ဘီယာ။ ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဆင်းဂါးဆိုတဲ့ ထိုင်းဘီယာလားတောင် မသိဘူး။ ဘားလမ်းနဲ့ ဖရေဇာထောင့်က လမ်းဘေးဆိုင်မှာ တွေ့လို့ ၀ယ်သောက်တာ။
ကောင်းကောင်းကန်းကန်းမှ မသောက်တတ်သေးတာဗျာ။ ဘီယာကလည်း တစ်ဘူးတည်းဆိုတော့ ဘာဖြစ်မှာလဲ၊ အလတ်ကြီးပေါ့။
ငယ်နုတဲ့ စာဖတ်သူတွေက တွေးနေလိမ့်မယ်။ အစစအရာရာ ပါးရှားတယ်လို့လည်း ဆိုသေးရဲ့၊ အခုကျတော့ နိုင်ငံခြားဖြစ် ဘီယာက ဘယ်က ရောက်လာပြန်တာတုံးလို့။
အဲဒီ့ခေတ်မှာ မှောင်ခိုဆိုတာ ရှိပါတယ်။ နယ်စပ်ကနေ ပစ္စည်းတွေ ခိုးသွင်းတာပေါ့။ အဲဒီ့ ခိုးသွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရန်ကုန်မှာ ဈေးတင်ပြီး ပြန်ရောင်းတာပေါ့။
အဲဒီ့ တစ်ခေတ်က မော်လမြိုင်မြို့ဟာ မှောင်ခိုဈေးကွက်ကြီးနဲ့ အရမ်းကို စည်ပင်ပါတယ်။ လေဟာပြင်ဈေး၊ နောက်ပိုင်း ပေါ်လာတဲ့ စိန်ဂျွန်းဈေးတို့ဟာ အဲဒီ့ မှောင်ခိုပစ္စည်းတွေ ရောင်းချတဲ့ ဈေးတွေပါ။
လေဟာပြင်ဈေးဆိုတာက အခု ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ အနော်ရထာလမ်းကြား၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဈေးကြီးပါ။ စိန်ဂျွန်းဈေးဆိုတာက ပြည်လမ်းမရဲ့အစ၊ ဂျပန်ဆေးရုံလို့ ခေါ်တဲ့ ရန်ကုန် အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံသစ်ကြီးရဲ့ ကျောဘက် မြေကွက်လပ်ကြီးမှာ ရှိနေခဲ့ဖူးတဲ့ ဈေးပါ။
အဲဒီ့ဈေးတွေမှာ တစ်ဖက်နိုင်ငံက ၀င်လာတဲ့ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းပေါင်းစုံ ရှိပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ အထည်အလိပ်ပါပဲ။ စားသောက်ကုန်လည်း ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာတွေလဲဆိုတာ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ တစ်ဖက်နိုင်ငံက သွင်းလာတဲ့ စားသောက်ကုန်ရယ်လို့ လောက်လောက်လားလား မှတ်မှတ်ရရ ဘာမှ မစားခဲ့ရဘူး ထင်တယ်။ လက်ပတ်နာရီတွေ ရှိတယ်ဗျာ၊ ခဆက်(ထ်)ဖွင့်စက်တွေ ရှိတယ်ဗျာ၊ အဲလောက်ပဲ မှတ်မိတယ်။
ကျွန်တော် ၀ယ်သောက်ခဲ့တဲ့ ဘီယာကတော့ ဘယ်က ဘယ်လို ၀င်တာလဲ မသိဘူး။ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက အဲဒီ့ ရောဂါ ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားဖြစ် စီးကရက်နဲ့ အရက်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ရောဂါကို ပြောပါတယ်။
စီးကရက်ဆိုရင် အခု ရှန်ဂရီလာ တစ်ဖြစ်လဲ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်ရှိရာ တိုက်ခန်းဝများနဲ့ တိုက်လှေကားထစ်များ တစ်ကြောမှာ ဆိုင်လေးတွေ ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားဖြစ် ဒိုင်ယာရီတို့၊ မီးခြစ်တို့ ရောင်းကြတယ်။ စီးကရက်ဆိုင်လေးတွေလည်း ရှိတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော် စ၀ယ်သောက်ဖူးတာ Rothmans ပဲ။ ဘူးလိုက် ၀ယ်မသောက်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ အလိပ် ၂၀ ၀င် ဒူးယားတစ်ဘူးကို ၁ ကျပ် ပြား ၈၀ ပေးရတဲ့ခေတ်မှာ Rothmans တစ်ဘူးက ခုနစ်ကျပ်ရှိတာကို။ ဒါပေမယ့် သောက်ကြည့်ချင်တာပေါ့။ မနေနိုင်တော့ အလိပ်လိုက် ရောင်းတာကို ၀ယ်သောက်တာပါ။ တစ်လိပ်ကို ပြား ၄၀ လား ပေးရတယ်။
အဲလို သောက်သောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကြိုက်လာတာ Kent ပဲ။ အဲတုန်းက Kent က အခုလို အပေါ့တွေချည်း ထုတ်တာ မဟုတ်သေးဘူး။ အပြင်းစားလည်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော်က ဒူးယားနဲ့ စခဲ့လို့လားတော့ မသိဘူး။ ဆေးလိပ် ပေါ့ရင် သောက်လို့ မရဘူး။ ဒူးယားက ပရုတ်အေး ထုတ်သေးပေမယ့် အဲဒါလည်း ခံတွင်း မတွေ့ဘူး။ ပူရှိန်း ပူရှိန်း အရသာကို မကြိုက်တာ။
အရက်က အဖေလည်း မရှိ၊ ကားသမားဘ၀လည်း ရောက်တော့မှ တကယ်သောက်ဖြစ်တော့တာဗျ။ အဲဒါတော့ အဲဒီ့အပိုင်းကျတော့မှ ရေးပါတော့မယ်။
အဲဒီ့ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကြီးမှာ ဖျစ်ဖျစ်မြည်အောင် ကောင်းခဲ့တာထဲမှာ ဒူးယားစီးကရက်လည်း ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ်လယ်လောက် ရောက်တော့မှ ဒူးယားတွေလည်း ဘ၀ပျက်တော့တာ။ အစီခံ ကျွတ်ထွက်လို ကျွတ်ထွက်၊ အလိပ်ပြေတွေ ရောင်းလိုရောင်းနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။ သို့ပေမယ့် ရမ်(မ်)နဲ့ အာမီရမ်(မ်)၊ တင်လဲဖြူ၊ အရက်ဖြူများကတော့ စံချိန်မီဆဲပါပဲ။
ကျွန်တော် ဆယ်တန်း ပထမနှစ် ဖြေနေဆဲလား၊ ဖြေပြီးစမှာလား မသိဘူး၊ ဦးကြီးကိုကို လာလည်တယ်။ သူ့နှမ သူလွမ်းလို့ပဲလားတော့ မသိဘူး။ အဖေနဲ့ နေရတာဆိုတော့ မန္တလေးနဲ့က အဆက်ဖြတ်ထားသလို ဖြစ်နေတာလေ။ အဖေက အမေ့ကို အမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်စေချင်တာမှ မဟုတ်တာကိုး။ ဒါပေမယ့် ဦးကြီးကိုကို ရောက်လာတော့လည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။
ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်ကြသလားတော့ မသိဘူး။ အဲဒီ့မှာ အဖေနဲ့ အမေနဲ့ ကွဲကြကွာကြမယ် ဖြစ်ပါရောလား။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အမေက ကားယူပြီး မန္တလေး ပြန်မယ် ဖြစ်ပါရော။ ဦးကြီးကိုကိုကလည်း အဖေ့ကို သိပ် ကြည့်ရပုံမပေါ်ဘူး။ အဲတော့လည်း ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ရှာပြီး ကျွန်တော်တို့ တူဝရီး သားအမိ သုံးယောက်သား မန္တလေးကို သွားကြသည်ပေါ့။
ကျွန်တော်လား။ ပျော်တာပေါ့ဗျာ။ အဖေနဲ့မှ မနေချင်တာ။ အဖေနဲ့ နေနေရတဲ့ ဘ၀ကို စိတ်ညစ်တာက ဘာနဲ့မှ မတူဘူး။ အခုဆို အိုခေပြီပေါ့။
အိုက်လိုနဲ့ မန္တလေးကို ရောက်သွားတယ်။ မန္တလေးရောက်တော့ အမေက ဂစ်ထာတစ်လုံး ၀ယ်ပေးတယ်။ ပျော်စရာက ပိုကောင်းသွားပြီ။ ၈၁ လမ်း၊ ၂၆ လမ်းနဲ့ ၂၇ လမ်းကြားက ဂစ်တာဆိုင်လေးမှာ ဦးကြီးကိုကို လိုက်ဝယ်ပေးတာပါ။ ကျပ် ၆၀ လား ပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘာသာ စမ်းစက်တီးကြည့်ပြီး ၀ယ်လာတာပေါ့။ ဂစ်ထာခေါ့(ဒ်)တွေ ပါတဲ့ စာအုပ်ကလေး တစ်အုပ်လည်း တစ်ခါတည်း ၀ယ်လာတယ်။ တီးပါပြီ တဗျန်းဗျန်း။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဂစ်ထာတီးဖို့ထက် သီချင်းဆိုဖို့ကို ပိုအားသန်တာ။ သည်တိုင်း အလွတ် အော်နေလို့က တယ်ဟန်မကျဘူး။ ဂစ်ထာလေးနဲ့ကျတော့ တင့်တယ်တာပေါ့လေ။
လားရှိုးသိန်းအောင် သီချင်းတွေက ကျွန်တော့် အသည်းစွဲတွေပဲ။ ပန်းဘုရင်မလေး၊ စပယ်ည၊ လယ်သူမလေး မောင့်ချစ်သူ၊ လွမ်းဘွယ်။ စိန်လွင့် သီချင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ နွေကျောင်းပိတ်ရက် မလိုချင်ပါ၊ ရှမ်းစကား မတတ်တော့ ခက်တယ်၊ တက္ကသိုလ်အေးမောင်ရဲ့ မူယာမာယာ မိရွှေညာ၊ ကားပြာလေးကို မျှော်ရတယ်၊ အသက်မက ချစ်ရသူလေးရယ် အစချီ သီချင်းတွေလည်း တကြော်ကြော်ပေါ့။ ကျွန်တော့် အသံလုံးနဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ အဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုဖြစ်တာပါ။
မန္တလေးမှာ ဦးကြီးကိုကိုက ကျွန်တော့်ကို ကားမောင်း သင်ပေးပါတယ်။ တကယ်တော့ မခက်လှပါဘူး။ ကျွန်တော့်အကျင့်က ကျွန်တော်စိတ်ပါပြီဆိုရင် ဘာကိုမဆို တစေ့တစောင်း အကဲခတ်ကြည့်နေတတ်တယ်။ အဲတော့လည်း ကားမောင်းတာကို အမြင်နဲ့ တော်တော် တတ်ပြီးသား ဖြစ်နေတယ်။ တကယ် တက်မောင်းတဲ့ အခါကျတော့ နှစ်ရက် သုံးရက်နဲ့ တတ်သွားပါတော့တယ်။
မန်းရာပြည့်ကွင်းထဲမှာ သွားသွားသင်ခဲ့ရတာကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ အဲတုန်းက သင်ပေးတာ ကိုဘိုဘို ဆိုတဲ့ ဦးကြီးကိုကိုရဲ့ မိတ်ဆွေလေးလားတော့ မသိဘူး။ ကိုဘိုဘိုက အဲတုန်းက ဈေးချိုက နဂါးဆေးလိပ် အရောင်းဆိုင်မှာ ဆိုင်တာဝန်ခံ လုပ်နေတယ်နဲ့ တူတယ်။
မန္တလေးအိမ်မှာက ကားထားစရာ နေရာက သီးသီးသန့်သန့် မရှိဘူး။ လူဝင် လူထွက်၊ စက်ဘီးလောက်ပဲ သွင်းနိုင်တဲ့ မြောင်းကူး တံတားလေးပဲ ရှိတယ်။ ကားထားမယ်ဆိုရင် ၀င်ပေါက်ကို ပြင်ရဆင်ရမယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ဘေး မြေကွက်လပ်မှာ ထားရမှာ။ အမိုးအကာလည်း မရှိဘူး။
ဒါနဲ့ ဆိုင်းတန်းရပ်က ကိုနိုင် အရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်မှာ ထားရတယ်။
ဘ၀တစ်ကွေ့ ခဏတွေ့ခဲ့၊ ခင်ခဲ့ရဖူးသူ
ကိုနိုင်ဆိုတာက အမှတ် ၉ မှာ နေတုန်းက ကျွန်တော့်ကို ညီအရင်းလို ချစ်ပြီး သူ့အိမ် ခေါ်ခေါ်သွား၊ အမဲသားဟင်းနဲ့ ထမင်းတွေ ကျွေးတတ်တဲ့ အစ်ကိုကြီး ကိုနိုင်ထူးအောင်။
ချော်တော နည်းနည်း ငေါ့လိုက်ဦးမယ်။
အဲဒီ့ ကိုနိုင်က မိဘ (ကျွန်တော်ထင်တယ် အဖေ) ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဒေါ်က သူ့ကို မွေးစားထားတာ။ သူ့အဒေါ်က လည်လည်ပတ်ပတ် ရှိတယ်။ အစတုန်းကတော့ ဆိုင်းတန်းရပ်ထဲမှာပဲ နေတာပေါ့။ ကျွန်တော် မန္တလေးနဲ့ ပြတ်သွားချိန်မှာ သူ့အဒေါ်ရဲ့ စီးပွားရေးက ဒီရေအလား တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာတယ်။ မြို့လယ် မျက်နှာကြီးတွေ နေရာ အရပ်မှာ တိုက်ဝယ်လိုက်တယ်။ ကိုနိုင်လည်း အဲဒီ့ကို ပါသွားတာပေါ့။
ကိုနိုင်က တကယ်က စစ်ဗိုလ်လုပ်ချင်တဲ့သူ။ တစ်ဖက်ကလည်း သူက ကျောင်းစာမှာ ချွန်ချင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆယ်တန်းမှာ သူ့စိတ်ကြိုက်အမှတ် မရနိုင်ရင် အအောင်မဖြေဘဲ ခြစ်ခြစ်ချခဲ့တာ ဘယ်နှနှစ်လဲ မသိဘူး။ ကျွန်တော့် စိတ်ထင် အနည်းဆုံး ၄ နှစ်လောက် ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ နောက်ဆုံး သူ စိတ်တိုင်းကျတဲ့ နှစ်မှ ဖြေတော့ တကယ်လည်း အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်သင်တန်းတက်ဖို့က အသက်က ကောင်းကောင်း လွန်သွားပြီ။ အဲဒီ့မှာတင် သူက ရန်ကုန် စက်မှု တက္ကသိုလ်ကို တက်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော် ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်းမှာ သူ ရန်ကုန် စက်မှုကို ရောက်လာတော့ ကျွန်တော့်ဆီ လာရှာပါတယ်။ ခက်တာက အဖေက သူ့ကို သိပ်ကြည့်မရပြန်ဘူး။ အဖေကတော့ အဲလိုပါပဲ၊ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေထဲက ဘိုနီ့ကိုလည်း ကြည့်မရဘူး။ သူ ကြည့်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲက သူ့သူလျှို ပေါက်ဖော် တစ်ကောင်ပဲ ရှိမယ် မှတ်တယ်။
အဲဒီ့ကောင် ပေါက်ဖော်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ တစ်လမ်းတည်း နေတာ။ ကျွန်တော့်ကို ခင်မင်သယောင်နဲ့ စွတ်ပေါင်း။ အတင်းကပ်၊ အတင်း မြှောက်ပေး၊ ပြီးတော့မှ ကျွန်တော် လုပ်သမျှ၊ ပြောသမျှ အဖေ့ဆီ အကုန် သံတော်ဦးတင်တဲ့ နွား။
ထားပါတော့။ ကိုနိုင့်ခမျာ အဖေ မကြည်မှန်း ရိပ်မိရှာတော့ အိမ်ပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ မထိုင်ဘူး။ သူလာရင် ကျွန်တော့်ကို အကြောင်းကြားပြီး လမ်းထိပ်က စောင့်တယ်။ ကျွန်တော်က သွားတွေ့၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး ဘာလေးထိုင်၊ လေပန်းပေ့ါ။ အဲတုန်းက အဖေ့လက်အောက်မှာ ပြားဝပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဘ၀ကို ကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေပုံရတဲ့ ကိုနိုင့်မျက်နှာကို အခုမှ တရေးရေး ပြန်မြင်လာတယ်။ သူက ဘာမှတော့ မပြောရှာပါဘူး။
မန္တလေးကို အဲဒီ့အချိန်က ရောက်တော့ ကျွန်တော်က ကိုနိုင့်အိမ်မှာ အနေများတယ်။ များဆို သူ့အိမ်မှာက ရေလောင်းအိမ်သာနဲ့မို့ဗျ။ ရန်ကုန်မှာ အသားကျနေတော့ အိမ်က တွင်းအိမ်သာကြီးကို ကျွန်တော် မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကိုနိုင့်အိမ်မှာ အနေများတော့တာပါ။
ကိုနိုင့်အပေါင်းအသင်းတွေ တစ်ပုံကြီးကြားမှာ ဟေးလားဝါးလားနဲ့ တအားပျော်ပေါ့။ အဲဒီ့အချိန်က တကယ် ပျော်ခဲ့တာပါ။ မိုးမမြင် လေမမြင်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။
ကိုနိုင့်ဘ၀ ကံအထဆုံး အချိန်လို့လည်း ဆိုနိုင်မယ်။ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ အဒေါ်ကလည်း သိပ် စီးပွားတက်နေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ မန္တလေးမြို့မှာ ဂျစ်ကား တ၀ီဝီနဲ့ ကိုနိုင်တို့ တကယ်လျှမ်းနေချိန်ပေါ့ခင်ဗျာ။ တစ်အိမ်လုံးကလည်း သူပြောသမျှ အဟောဝတပဲ။ မြကို စိန်ရံထားတဲ့ လက်စွပ် တ၀င်းဝင်းနဲ့။ မန္တလေးက သမီးရှင်တွေ မျက်စိကျတဲ့ သူဌေးတူ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်သားကြီးပေါ့။
လူကလည်း အဆိုကောင်း၊ အပြောကောင်း။ တကယ့် မန္တလေးသား စတိုင်ပဲ။ ဟန်ပန်ကို မှန်းကြည့်ချင်ရင် ကွယ်လွန်သူ မင်းသားကြီး ဇော်ဝမ်းရဲ့ အမူအရာနဲ့ တိုင်းထွာကြည့်လို့ ရလောက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘ၀ဟာ သိပ်အံ့သြစရာ ကောင်းတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဟာ အံ့သြစရာ ကောင်းလှတယ်လို့ပဲ ဆိုရမလား မသိဘူး။
ကိုနိုင့်ကို အသားကုန် မြှောက်စားတုန်းက အိမ်ရှေ့မင်းသားတစ်ပါးအလား မြှောက်စားခဲ့တဲ့ သူ့အဒေါ်ဟာ ကိုနိုင်လည်း သူကြိုက်တဲ့ မိန်းမ သူ့ဘာသာ ရွေးချယ်ပြီး ယူလိုက်ရော သူ သဘောမတူနိုင်တာလေး တစ်ချက်နဲ့ ပစ်ထားလိုက်တော့တာများ တစ်ချိန်က သူဌေးရပ်ကွက်မှာ လျှမ်းခဲ့တဲ့ ကိုနိုင့်ခမျာ ဆိုင်းတန်းရပ်က ဖြစ်ကတတ်ဆန်း အိမ်လေးပေါ်မှာ ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့၊ စိတ်လက်မချမ်းမသာနဲ့ ဘ၀ဇာတ်သိမ်းသွားခဲ့ရရှာပါတယ်။
ဖြစ်ကတတ်ဆန်း အိမ်လေးလို့ ပြောရတာက ကျွန်တော် မန္တလေးမှာ ကျောင်းတက်တုန်းက သူတို့ နေခဲ့တဲ့ ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီးက မန္တလေးရဲ့ အကျော်ဇေယျ မီးထဲပါသွားတဲ့နောက် သူ့အဒေါ်က မြေနေရာ မပျောက်အောင်သာ စတိ ပြန်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
နောက်တစ်ချက်က သူ့အဒေါ်က ဘယ်ကဲ့သို့ မြှောက်စားလိုက်သလဲတော့ မသိဘူး။ စက်မှု ပညာနဲ့ စက်မှုဘွဲ့ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရယူထားတဲ့ ကိုနိုင်ဟာ သူ့အဒေါ်ကလည်း သူ့ကို ခါထုတ်လိုက်ရော၊ စိတ်ဓာတ်တွေသာ အကျကြီး ကျရင်း ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တော့ဘဲ ဖြစ်သလို နေသွားရင်းက ဘ၀ကို အရှုံးပေးသွားတယ်လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တော်တော့်ကို သံဝေဂ ယူထိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။
ကျွန်တော့်ခမျာ မန်းရွှေမြို့မှာ မအားနိုင်ရှာ
ကျွန်တော်တို့ သားအမိ မန္တလေးကို ပြေးခဲ့ကြတဲ့ အခေါက်မှာတော့ ကိုနိုင် ခေါင်းချသွားတဲ့ အဲဒီ့အိမ်နေရာမှာ အမေ့ကားကို ထားခဲ့ရပါတယ်။ ထားဆို အဲဒီ့မှာ ဂိုဒေါင်လေးတစ်ခုက အသင့်ရှိနေလို့ပါ။ အဲဒီ့အချိန်က အဲဒီ့ အိမ်မှာ နေနေသူတွေကတော့ ကိုနိုင့် အစ်မပဲလား သေချာ မမှတ်မိဘူး
လစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်က အဲဒီ့ကားကို အမေတို့၊ ဦးကြီးကိုကိုတို့ မသိအောင် ထုတ်မောင်းပါတယ်။
မှတ်မိသေးတော့တယ်။ ကိုနိုင့် သူငယ်ချင်းတွေ တစ်အုပ်တစ်မနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ စစ်ကိုင်းသွားကြတော့ ကျွန်တော်က အပျော်လွန်ပြီး ကားဘောနက်ပေါ် တက်ထိုင်ပြီး ဟေးလားဝါးလား လုပ်ပါတယ်။ ကိုနိုင်က မောင်းတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ဘူး။
မှတ်မိတာကတော့ မြစ်ဆိပ်အဆင်း လမ်းတစ်နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ကားအလာကို လမ်းဘေး ကပ်ပြီး ရှောင်ပေးတဲ့ အမယ်ကြီးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ရေရွတ်လိုက်တဲ့ စကားပါပဲ။ ကျွန်တော့်နားနဲ့ကို ဆတ်ဆတ်ကြားလိုက်ရတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ကားပေါ်ပါတဲ့ ကိုနိုင်တို့ တစ်ဖွဲ့လုံးလည်း ကြားလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီ့ အမယ်ကြီး ကျွန်တော့်ကို မြင်ပြီး ရွတ်လိုက်တဲ့ စကားကတော့ခင်ဗျာ… ဟုတ်ကဲ့… “သြော်… သေတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ…”ပါတဲ့ ခင်ဗျား။
ကျွန်တော်တို့ ဇက အဲသလို။ အရပ်က သြဘာပေးရလောက်အောင် ကဲချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပါပဲ။
အဲဒီ့အချိန်က မန္တလေးမှာ ကျွန်တော် ပျော်တဲ့အထဲ ကိုနိုင်သာ မကပါဘူး။ ချစ်သူ့ရင်ခွင် ရှာပုံတော်ထဲက “မမ (မန္တလေး)”ကို သွားသွား ညှော်ရတာလည်း သိပ်ပျော်စရာ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ရေးပြီးသားပေမယ့် မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် အတိုချုပ် ပြန်နှူးရရင် အဲဒီ့မမရဲ့ဆိုင်က မမသန်းတို့ ဆိုင်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရိပါတယ်။ မမသန်းရဲ့ မောင်လေးအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို အလိုက်အထိုက် ဆက်ဆံနေတာ၊ ဘယ်ရမတုံး၊ မိန်းမမြင်ရင် မနေနိုင်တဲ့ ရောဂါအရင့်အမာနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သူ့ဆီ သွားသွား ကြောင်တော့တာပေါ့ဗျာ။
ဆိုင်တင် သွားကြောင်တာ မဟုတ်ဘူး။ အိမ်အထိပါ လိုက်ကြောင်သေးတာ။ ကျွန်တော် မျက်နှာရူးပဲ၊ ဘယ်နေပါ့မလဲနော်။
သူကလည်း မန်းသူပီပီ ၀င်းဦးဆို အသည်းစွဲ။ အဲတော့ သူ့ဆီမှာ ၀င်းဦးရဲ့ စန္ဒာမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၁ အမှတ် ၁ ကနေ နောက်ဆုံးထုတ်အထိ အပြည့်အစုံ ရှိတယ်။ အဲဒါ သွားသွားငှားဖတ်ရင်း သူ့ဆီ ရောက်နေတာ။ အိမ်မှာက အဲဒီ့အချိန်မှာ ဦးကြီးကိုကိုရဲ့ စက်ဘီးကလည်း ရှိနေပြန်တော့ အဲဒီ့ စက်ဘီးကလေးနဲ့ မမ နေထိုင်ရာ ရွှေပြည်ရပ်ကို နှင်ရတာပေါ့ ခင်ဗျာ။
စာကလည်း တအားဖတ်နေချိန်ဆိုတော့ စန္ဒာမဂ္ဂဇင်းသာ မကပါဘူး၊ ၈၁ လမ်း၊ ၂၂ လမ်းနဲ့ ၂၃ လမ်းကြားလား၊ ၂၃ လမ်းနဲ့ ၂၄ လမ်းကြားလား၊ သေချာမမှတ်မိတော့တဲ့ စာအုပ်အငှားဆိုင် တစ်ဆိုင်က စာအုပ်တွေလည်း ၀ါးစားသလိုကို ဖတ်နေခဲ့တာပါ။ ၀တ္ထုတွေပေါ့။ တက္ကသိုလ်တင်မြင့်ဆို သိပ်ကြိုက်ပဲ။ သူ့ပင်တိုင် ဇာတ်ကောင် လေးလေးမြင့်ဆို ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ အတော့်ကို လှတာ။ အောင်ကျော်ကျော်တို့၊ လူအောင်တို့လို စာရေးဆရာတွေပါ မကျန် ဖတ်နေတဲ့အခိုက်ပေါ့။ မောင်မောင်မြင့်လွင်ရဲ့ အဖွဲ့အနွဲ့တွေလည်း လွှတ်သဘောကျ။
ကျွန်တော့်မှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အားကို မအားရဘူး။ ကိုနိုင်၊ ဈေးချို၊ စာအုပ်တွေ၊ ဂစ်ထာ၊ သီချင်း။ ၀တ္ထုတွေလည်း ရေးဖြစ်နေတယ်။ တစ်ပုဒ်မှတော့ အဆုံးမသတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေးတာကတော့ ရေးဖြစ်တာပေါ့။ ကဗျာတွေလည်း တစ်နေ့တစ်ပုဒ် မဟုတ်တောင် သုံးရက် တစ်ပုဒ်လောက် ရေးဖြစ်တယ်။ အချစ်အလွမ်းတွေပေါ့ဗျာ။
အဲဒီ့အခိုက်အတံ့မှာ ဖြစ်တာ တစ်ခုရှိသေးတယ်။
ကျွန်တော်က ဆေးလိပ်ကို အဲဒီ့အချိန်မှာ အတော်စွဲနေပြီ။ မသောက်ရ မနေနိုင်သလောက် ဖြစ်နေပြီ။ အိမ်မှာကျတော့ ခံတွင်းက တအားချဉ်တတ်နေပြီ။ အဲတော့ ညအိပ်ရာ ၀င်ချိန်၊ အကုန်လုံး မီးပိတ် အိပ်ကုန်ပြီဆိုရင် ခိုးသောက်တော့တာ။
တစ်ညသားမှာ ကျွန်တော် ဆေးလိပ်သောက်လို့ ကောင်းနေတုန်း အခန်းမီးက ဖျတ်ခနဲ လင်းလာတယ်။ ဦးကြီးကိုကိုက စောင့်ဖမ်းတာပါ။
ကျွန်တော့်ဖြင့် ပျာသွားတာပဲ။ အဖေ့လိုသာဆို ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ၊ အသေ အဆော်ခံရတော့မှာလေ။
ဒါပေမယ့် ဦးကြီးကိုကိုက အေးဆေးပါ။
“မင်းလည်း ထိုက်သင့်တဲ့ အရွယ် ရောက်တန်သလောက် ရောက်နေပြီပဲ၊ ခိုးမသောက်ပါနဲ့ကွ။ မီးမီးထင်းထင်း စိတ်ပူရတယ်။ ဗြောင်ပဲ သောက်ပါမောင်ရာ…”တဲ့။
မေမေ့ရှေ့မှာဆိုတော့ တရားဝင် ပါမစ်ကျသွားတော့တာပေါ့။
အဲတော့လည်း မန္တလေးမှာ နေနေရတဲ့ အဲဒီ့အချိန်က ကျွန်တော့်ဘ၀ဟာ တကယ့်ကို မိုးမမြင် လေမမြင် ပျော်စရာ ကောင်းနေတော့တာပေါ့။
Oakker Seithu ဘီအီးဒီစီက သိပ်ကောင်းတယ်လို့ တစ်နေ့က မန္တလေး FM မှာ ဆရာမျိုးမြတ်သူနဲ့ ဆရာကြွက်(ဘယ်သူလည်းမသိဘူး) တို့ ပြောနေတာ ကြာလိုက်ရတယ်။ ယမကာ စကားဝိုင်းဆိုပြီး ပြောလိုက်ကြတာ။ 😀 ဆရာမောင်သော်ကတွေရော ချစ်ဒုက္ခ ဦးဘညွန့်တွေရော စုံလို့ပဲ။
ခုခေတ်မှာတော့ အဲလိုမရှိတော့ဘူးလို့ ပြောတယ်။ 🙂
ATK ကြွက်ဆိုတာ သိမ်းတင်သားဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ စာရေးတဲ့ ကိုကြွက်နီ။ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ဘော်ဒါ အရင်းခေါက်ခေါက်။ အပေအတေ။ ချစ်စရာလည်း အင်မတန် ကောင်းတဲ့သူ။
Oakker Seithu ဟိုးအရင်တုန်းက ပစ္စည်းတွေက သိပ်ကောင်းခဲ့တယ်ထင်တယ်ဆရာ။ နောက် ဆရာပြောဖူးးတဲ့ ရေခဲသေတ္တာဆိုတာလည်း မြန်မာပြည်လုပ်ပဲထင်တယ်။ National တံဆိပ်လို့ ထင်တယ်ဗျ။
ခုခေတ်ကတော့ မြန်မာလုပ်ဆို အိမ်ခင်းတဲ့ ကြွေပြားတောင်မကောင်းဘူး 😀
Baby Shwe Piguet ချဲ့မနေပါနဲ့ ရှင့်ဆေးလိပ်ဋီကာ၊ လူကြုံနဲ့ထဲ့ပေးပါ့မယ်။ 🙂
ATK ကျေးဇူးဘာ မမဂျီး။ ပါရီက ဘယ်လိုမှ ၀ယ်သွားလို့ မရတာနဲ့ မဒရစ်ကျမှ စပိန် ဆေးလိပ်ဝယ်ရတယ်။ သူလည်း ကောင်းတာပဲခည 🙂
Mai Xinh Dep ဆရာ့စာထဲမှာ ဖတ်ရလို့ ဆေးပြင်းလိပ်တွေ ဟုိုတလောက ကြည့်တာ တစ်လိပ်ကို ဒေါ်လာငါးရာလောက်ရှိတယ်နော်။ အံ့ရော။ ဈေးကြီးထှာ။
ATK သြော်…. တမီးဂလေးဂ ဒယ့်ဂို ၀ယ်လာပေးမို့ရားးးး အားနာဇာဂျီး(စ်) 🙂
Mai Xinh Dep ၀ယ်ပေးချင်ထှာ။ တကယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါးရာတောင်။
ATK အိုက်လိုလေး ပြန်ရေးဖော်ရတာနဲ့ကို ကျေးဇူးဒေ လှိမ့်တင်နေဘာဘီအေ
Mai Xinh Dep ဒယ် ဈေးတော်တာလေး ပြောင်းကြိုက်ပါလား 😛 ချိစ်ဆိုလဲ ဈေးကြီး အပြာရောင် လေဘယ်ကလဲ ဈေးကြီး
ATK အယ်… အပြာရောင် မမက်ပါဝူးအေ။ စွေရောင်လောက်ဆို ချိုးပု(စ်) 😀 လဂါး ပြောဒါနော်။ ဘာဆိုဘာမှ ခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့။ ဒယ့်ဘ၀က ပြည့်ဇုံဘာဒယ်။ အခု တောင်ဂျီးက ဆန်အရက် တောက်နေဒါ။ ပန်းသီးလေးနဲ့ ချိ(စ်)လေးနဲ့။ 😀
Mai Xinh Dep noted ဒယ်။ ဒယ် ၀က်ဆီဖတ်ကြိုက်လား။ ဗျက်နမ်မှာတွေ့ရင် ၀ယ်လာခဲ့မယ်။ ငရုတ်သီးနဲ့ကြော်ထားတာ ကျွတ်နေတာပဲ။ Mai Xinh Dep ရွှေရောင်ကိုတော့ ဈေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ဈေးမကြီးရင် ၀ယ်လာမယ်။ 😀
ATK အဲ… ၀က်ဆီဖတ်လည်း ကြိုက်လှသလေ။ အလကားပြောတာနော်။ စွေရောင်ကို မစဉ်းစားနဲ့။ သိပ်ဝယ်ချင်ရင် အနက်နှစ်ထပ်ကွမ်းလောက်ဆို အိုစခေ။
Mai Xinh Dep noted
Thet Mar တက္ကသိုလ် မောင်အောင်ဆွေ ဆိုတာ ကောမှတ်မိလား စုစုလှိုင် ဆယ့်ခြောက်နှစ် ရေးတာ လေ ရှိသေး ရေးသေးလား ငယ်ငယ်ကသိတ် ကြိုက်ခဲ့တာ
ATK မှတ်မိတယ်။ အသံမကြားမိတော့တာလည်း ကြာပြီ။
Author lettwebawPosted on 25 August 2015 Categories Memoirs
Previous Previous post: အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၁၀
Next Next post: 39-Day Prayer